Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/19 Janoary 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/19 Janoary 2013
Befanamy (nitranga in-1) : Toraka izany ihany koa tao Befanamy Toliara. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
nitana (nitranga in-1) : Ity farany izay efa nitana ny toeran'ny minisitry ny Vola sy ny tetibolam-panjakana tamin'ny fitondran'ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana. (Sombiny)
mifandrairay (nitranga in-1) : Dia mifampitohitohy sy mifandrairay eny ka ny fihinanana ny henan-kisoa avy ity no mety ho lasa «basin'ariary fito», tsy ho tian'ny mpanan-karena nefa tsy takatry ny manana akory. (Fanabeazana « haizina »)
kanan (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Moon (nitranga in-1) : nANAMPY TOSIKA > Sady nidera ny Filohan' ny tetezamita, Andry Rajoelina tamin'ny fana- pahan-kevitra noraisiny no mbola nanamafy ny fanambaran'ny Von-drona Sadc ny amin'ny tokony hitazonana ny tetiandrom-pifidianana ho amin'ny volana mey 2013 ny sekretera jenera- lin'ny Firenena mikambana, Ban-ki Moon. (Sombiny)
Saint (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo
Fandaharan-dalao Sabotsy 19 janoary: 8 ora : U16 : AT2B # TMB2A 9 ora 30 : Vehivavy : Saint Michel # AT2B 11 ora : N1A : Challenger # TTS ; 1ora : Vehivavy : BFT # JCSA ; 2 ora : N1A : Dream Team # Bemiray, ekipa ahitana ireo kalaza amin'ny basket. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Surfs (nitranga in-2) : Anisan'ny mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan satria dia hita taratra ao anatin'ny fampirantiana ny fandalovan'ity tarika malagasy nanana ny lazany tamin'ny taona 60 ity, tany an-toerana. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
pianakaviana (nitranga in-1) : Vola Ar 700 000, solosaina enti-tanana iray ary firavaka volamena maromaro no lasan'ireo jiolahy mano-didina ny folo nirongo basy tamin'io fotoana nanafihana an'ilay raim- pianakaviana io. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
pinggang (nitranga in-1) : Ao Indonezia ihany izy io no refesina amin'ny ‘mata kaki, betis, dengkul, dada, pinggang, leher' (hakitrokely, ranjo, lohalika, valahana, tratra ary tenda). (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Tsaralalàna (nitranga in-1) : Nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona tetsy amin'ny Central Hôtel, tetsy Tsaralalàna, omaly no nanavaozana ny mpitantana ny sendikan'ny mpamokatra fampisehoana an-tsehatra sy rakikira ary rakitsary. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
takatry (nitranga in-1) : Dia mifampitohitohy sy mifandrairay eny ka ny fihinanana ny henan-kisoa avy ity no mety ho lasa «basin'ariary fito», tsy ho tian'ny mpanan-karena nefa tsy takatry ny manana akory. (Fanabeazana « haizina »)
Isotry (nitranga in-2) : hanao fanambarana goavana momba ny raha- raham-pirenena ny Fian-gonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fjkm) amin'ny sabotsy 26 janoary izao, eny amin' ny Fiangonana Isotry Fiti-avana, araka ny nambaran'ny filohany, ny pasitera Rasendrahasina Lala afak'omaly. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
niainan' (nitranga in-1) : Avy amin'ny zoron'ny firafitry ny mponina, tsy ho vitan'i Shina ny hanao fahagagana ara-toe-karena tahaka izay niainan'i Japan, Taiwan ary Korea. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Noenty (nitranga in-1) : Noentin'ny ankolafy Ravalomanana ho porofo fanohanana ity fitoriana ity ny fanambarana sesilany nataon'ny lietnà-kolonely Charles Andrianasoavina mahakasika io raharaha io. (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
Michel (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo
Fandaharan-dalao Sabotsy 19 janoary: 8 ora : U16 : AT2B # TMB2A 9 ora 30 : Vehivavy : Saint Michel # AT2B 11 ora : N1A : Challenger # TTS ; 1ora : Vehivavy : BFT # JCSA ; 2 ora : N1A : Dream Team # Bemiray, ekipa ahitana ireo kalaza amin'ny basket. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
Hôtel (nitranga in-1) : Nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona tetsy amin'ny Central Hôtel, tetsy Tsaralalàna, omaly no nanavaozana ny mpitantana ny sendikan'ny mpamokatra fampisehoana an-tsehatra sy rakikira ary rakitsary. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
Ctrip (nitranga in-1) : Niantso ny hanitsiana haingana ilay politika ny mpiara-manorina ny Ctrip Liang Jianzhang[zh]:
僵化的生育政策导致倒金字塔的人口结构，为中国经济发展埋下了巨大的隐患，引发各种社会问题，改革刻不容缓！ Nitarika “fivadihan'ny piramida”-n'ny rafitry ny mponina miaraka amin'ny loza tsy nirìna mety hitranga eo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena sy eo amin'ny olana ara-tsosialy isan-karazany io politika henjana io. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
dibikin (nitranga in-1) : @Oepaij Wilayah yang harusnya jadi zona luahan air (discharge) malah dibikin pemukiman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
siapa (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
‏@cewequat Silakan berpartisipasi di #BerbagiSELIMUT Menolong warga terdekat sekitar & siapa saja yg bisa kita bantu meringankan musibah #BanjirJKT @cewequat Mandraisa anjara amin'ny #berbagiselimut (mizarà bodofotsy). (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
terendam (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hirosoana (nitranga in-1) : «Ireo no dingana voalohany tsy maintsy hirosoana mankany amin'ny sehatry ny matihanina», hoy ihany i Mamy Andriamasinaivo. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
facebook (nitranga in-2) : com/JJZ6SYfo
Mpanoratra Carolina · Nandika avylavitra
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
maaf (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
@BLUTransJakarta: Info | 09:16 Mhn maaf saat ini semua koridor stop operasi imbas banjir dan jlr tdk dapat dilalui @BLUTransJakarta: Ialànay tsiny ny filazàna fa amin'izao fotoana dia tsy afa-mandeha daholo noho ny tondradrano sy ny làlana tsy azo aleha ny fiara fitateram-bahoakantska rehetra. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
fahatapahana (nitranga in-1) : Isan'ny nahitana ratra ny tarehiny, ny tratrany ary misy fahatapahana roa eo amin'ny tongony, ny iray eo amin'ny feny ary ny iray kosa eo amin'ny ranjony. (Tapatapany)
Hanitry (nitranga in-1) : Hanitry Ny Aina. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
Manjakaray (nitranga in-1) : Tamin'ny alalan' ny isa 27 no ho 12 kosa ny nandresen'ny FT Manjakaray, izay tompondakan'Analamanga, teo amin'ny sokajy junior, ny ekipan'Atsimo Andrefana, tamin'ny manasa- dalana ilany. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
Global (nitranga in-1) : Ny lehiben'ny Fanoratana ao amin'ny Global Times Hu Xijin [Hz] no nandray ny fitarihana izany:
支持坚持计划生育大格局，同时支持部分、逐渐放开一些具体政策。中国的高生育率得以控制住，这是了不起的社会成 就。我不希望后代们生活在20亿人口甚至30亿人口的中国…我周围的很多双独已经开始生2个孩子了， 祝贺他们。但这不意味计划生育的终结。 Manohana ny politikan'ny zaza tokana aho; fa manohana ihany koa ny famahana tsikelikely ny politika sasany any amin'ny faritra sasany. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Dillet (nitranga in-1) : Amin'ny andiany manaraka dia mety aloan'ny BOA Madagascar mihitsy ny karamany mandritra ny fanomanana”, hoy i Jacques Dillet, tale jeneralin'ity banky ity, tetsy Antaninarenina omaly. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
dolara (nitranga in-1) : Mandray onitra mahatratra an-tapitrisany dolara isan-taona ry zareo. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Widodo (nitranga in-1) : Napetraky ny Governora Joko Widodo ho amin'ny toeran'ny hamehana ny renivohitra hatramin'ny 27 Janoary. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Abby (nitranga in-1) : Mpanoratra Abby · Nandika Jentilisa
Nonina (nitranga in-1) : Nonina nandritra ny volana maromaro tao amin'ny tranon'ny mpi- anatry ny oniversite malagasy nanomboka ny oktobra 1963 mihitsy moa izy enina mianadahy nandrafitra ny tarika. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
hifandrimbona (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
Nipoitra (nitranga in-1) : Nipoitra teo am-baravarankely teo ambony rihana avy eo ilay tompon-trano, ka avy hatrany dia notifirin'izy ireo,dia voa teo amin'ny tendany », hoy ny fitantaran'ny lehilahy iray monina eo amin'ny manodidina, nitsikilo avy eo am-baravaran-kely ny fizotry ny fanafihana. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
Weibo (nitranga in-2) : Ao amin'ny Sina Weibo aza dia io no lasa lohahevitra mafana laharana voalohany tamin'ny 16 sy 17 janoary. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
meringankan (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
nisiany (nitranga in-1) : Misy ny fampirantiana mitety ireo toerana maro amin'ity tanàna ity, ka ahitana ireo sary manamarika ny 90 taona nisiany. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
Française (nitranga in-1) : Nanolotra fitaovana hoenti-miasa, nahitana solosaina sy ny kojakojany, tabilao… ho an' ny ivon-toerana fanangonana sy fandiniham-baovao (Cervo) eo anivon'ny birao nasionaly momba ny fitantanana ny loza voajanahary (Bngrc) ny Coopération Française omaly. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
祝贺他们。但这不意味计划生育的终结。 (nitranga in-1) : Ny lehiben'ny Fanoratana ao amin'ny Global Times Hu Xijin [Hz] no nandray ny fitarihana izany:
niarahan' (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia efa tafapetraka eo anivon'ny tribonaly iraisam-pirenena sy any amin'ny vondrona Sadc ny fitorian'ny ankolafy Ravalo-manana ny Filohan'ny tete-zamita, Andry Rajoelina, mahakasika ny voalaza fa «fanonganam-panjakana niarahan'ny Tafika sy ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona tamin'ny taona 2009 ». (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
Andriamasinaivo (nitranga in-2) : I Mamy Andriamasinaivo, mpitantana ny trano mpamokatra Do Sôl indray no hitarika izany. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
nampiasaina (nitranga in-2) : Indrisy anefa fa nitera-doza nankarary renim-pianakaviana maromaro ny fanafody nampiasaina teny Atsimondrano teny. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
dapat (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
Korea (nitranga in-1) : Avy amin'ny zoron'ny firafitry ny mponina, tsy ho vitan'i Shina ny hanao fahagagana ara-toe-karena tahaka izay niainan'i Japan, Taiwan ary Korea. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
nankarary (nitranga in-1) : Indrisy anefa fa nitera-doza nankarary renim-pianakaviana maromaro ny fanafody nampiasaina teny Atsimondrano teny. (Fanabeazana « haizina »)
naratra (nitranga in-1) : lozam-pifamo-ivoizana > Lehilahy iray 40 taona nitondra môtô no naratra mafy nifandona tamin'ny kamiao teo Ambohidrabiby omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora. (Tapatapany)
Rabenjamina (nitranga in-2) : Mba tokony hojeren'ny fanjakana ny hetsika eny anivon'ny fokontany toy itony, izay mahasarika ny tanora saika avy amin'ny lafy valon'ny renivohitra », hoy Rabenjamina Fanja, mpitarika ny AT2B. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
tribonaly (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia efa tafapetraka eo anivon'ny tribonaly iraisam-pirenena sy any amin'ny vondrona Sadc ny fitorian'ny ankolafy Ravalo-manana ny Filohan'ny tete-zamita, Andry Rajoelina, mahakasika ny voalaza fa «fanonganam-panjakana niarahan'ny Tafika sy ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona tamin'ny taona 2009 ». (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
talen' (nitranga in-2) : Raha ny voalazan-dRakotoarisoa Jean Jacques, talen'ny kabinetran'ny minisitera Fampianarana ambony dia 50 eo ireo efa nahazo fankatoavana hisokatra sy hampianatra. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
Ivato (nitranga in-3) : teratany kaomôrianina efatra no tratran' ny polisy miaro ny sisin-tany tetsy Ivato ny alin'ny alakamisy teo, nitondra pasipaoro sandoka teny amin'ny seranam-piaramandina Ivato. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
Radavidson (nitranga in-1) : MIAMPY ISA HATRANY > Nanamafy ny fanambarana maha-kasika ny ho firotsahany amin'ny fifidianana Filo-ham-pirenena i Benjamin Radavidson Andriam-parany. (Sombiny)
body (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
afak' (nitranga in-3) : hanao fanambarana goavana momba ny raha- raham-pirenena ny Fian-gonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fjkm) amin'ny sabotsy 26 janoary izao, eny amin' ny Fiangonana Isotry Fiti-avana, araka ny nambaran'ny filohany, ny pasitera Rasendrahasina Lala afak'omaly. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
5000 (nitranga in-1) : 000 ny mpisera ny aterineto no mitazona fa izao no fotoana hanesorana ny politikan'ny zaza tokana raha 5000 ihany no mbola manohana ilay politika. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
voavaha (nitranga in-1) : miaiky ireo mpikambana eo anivon'ilay vondrona poli- tika mpisava lalana amin'ny fanatanterahana ny diniky ny samy Malagasy (Gec) sy ireo mpikambana eo anivon'ny fiombonamben'ireo sendikan' ny mpiasam-panjakana ambony fa «mbola tsy voavaha tante-raka ireo olana politika eto Madagasikara na dia tsy ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena aza ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana». (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
hoentina (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia tokony ho amin'iny herinandro ambony iny no hanambara ny fomba hoentina miroso amin'ny fanelanelanana ny krizy eto amintsika ny Ffkm. (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
zona (nitranga in-1) : @Oepaij Wilayah yang harusnya jadi zona luahan air (discharge) malah dibikin pemukiman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
elektromekanika (nitranga in-1) : Mijaly ihany koa ireo indostria vao mahita teknisiana ambony na injeniera manana traikefa sy fahaiza-manao momba ny elektronika, ny fihetsi- tenany, ny elektromekanika. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
Nomontsany (nitranga in-1) : Ara-pirahalahiana
Nomontsanin'ny Fennecs Alzerianina tamin'ny alalan'ny isa 4 no ho 1 ny Platinium FC, ekipa afrikanina tatsimo, ny alin'ny alakamisy lasa teo, tao Afrika Atsimo. (Anjoron- »CAN »)
nisian' (nitranga in-1) : Kenda ny asa fihariana ara-toekarena tao an-toerana taorian'ny roa andro nifanesy nisian'ny orana nikija tao Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hanambarana (nitranga in-1) : «Ny fivondronana ao anatin'ny sendika ihany no sehatra iray hanambarana ny hery ka ahafahana miatrika ireo sehatra samihafa amin'ny asa atao», hoy i Mamy Do Sôl. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
Ekipa (nitranga in-1) : Ekipa mpilalao basket 60 izao no hita ao Andraisoro, misy olona 700 mahery. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
nosimbay (nitranga in-1) : Zazavavikely iray vao 3 taona monja indray no voalaza fa nosimbain'ny tovolahy 22 taona teny Itaosy, afak'omaly. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
mpikirakira (nitranga in-1) : Rasoanaivo Noroniaina Sahoby, 20 taona, Anatihazo Isotry
« Mpivarotra ny reniko ary miasa mpikirakira milina amina orinasa tsy miankina ny raiko. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
Dominique (nitranga in-1) : Misy ny tsy mahita asa mihitsy », hoy Razafi- mahatratra Dominique, avy ao amin'ny minisiteran' ny Fampianarana ambony. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
tompondakan' (nitranga in-3) : na dia ratsy fanomboka tany amin'ny andro voalohany aza ny ekipan'i Atsinanana, teo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ho an'ny baolina lavalava, sokajy junior, dia tonga eo amin'ny fiafaran' ny fifaninanana. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
hiondrana (nitranga in-1) : Saika hiondrana tamina fiaramanidina hihazo an'i Frantsa izy ireo izao tra-tehaka izao », hoy ny loharanom-baovao azo teo anivon'ny polisy miaro ny sisin-tany. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
fitovitovian' (nitranga in-1) : Maro ny mpampianatra onivrsite sy mpanay toe-karena no mandresy lahatra fa niteraka andian'olana lavitr'ezaka ny politikan'ny zaza tokana, ao anatin'izany ny fahanteran'ny mponina sy ny tsy fitovitovian'isan'ny lahy sy ny vavy. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
môtô (nitranga in-1) : lozam-pifamo-ivoizana > Lehilahy iray 40 taona nitondra môtô no naratra mafy nifandona tamin'ny kamiao teo Ambohidrabiby omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora. (Tapatapany)
Nitondra (nitranga in-1) : « Nitondra taratasy avy amin'ny doko-tera milaza ny fahasimban'ilay zaza no sady nametraka fitoriana teto aminay ny renin'ilay zaza, omaly. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
tahunan (nitranga in-1) : Ini baru banjir 5 tahunan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
anatiny (nitranga in-1) : Na ny kaominina na ireo fokontany 19 ao anatiny dia samy nozarain'ity orinasam-pifandraisana ity finday rahateo hanehoana izany. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
Naorina (nitranga in-1) : Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
计生委成立于1981年，有50万全职雇员和600万兼职员工，每年征收的罚款达数百万美元 Naorina tamin'ny 1981 ny Vaomieran'ny Mponina sy ny Fandrindra-Pianakaviana. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Animal (nitranga in-2) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
‏@DianOnno Jakarta Animal Aid Network (JAAN) sepertinya juga sedang membantu hewan yang terkena dampak #banjirJkt. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
tiako (nitranga in-1) : Tsy tiako ny hahita ny taranaka ahitana mponina roa na telo miliara ao amin'ny firenena iray. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
mobil (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
teknisiana (nitranga in-1) : Mijaly ihany koa ireo indostria vao mahita teknisiana ambony na injeniera manana traikefa sy fahaiza-manao momba ny elektronika, ny fihetsi- tenany, ny elektromekanika. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
lefitry (nitranga in-1) : Ho azo antoka kokoa ny fanapahan-kevitra horaisina ary hirindra kokoa ny asa, vokatr'izany”, hoy ny fanazavan'ny Dr Randriatahina Raymond, lefitry ny sekretera mpana- tanteraky ny Bngrc, momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
Namesis (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
ateraky (nitranga in-1) : Saingy tahaka ny tsy mahita ny olana ara-mponina ankehitriny ateraky ny politikan'ny zaza tokana ireo mpanohana. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
hewan (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
distrika (nitranga in-1) : Mampiasa ny tenifototra #banjirJKT (tondradranon'i Jakarta) ireo mpisera ety anaty aterineto mba hizaràna vaovao mikasika ny fivoaran'ilay tondradrano any amin'ny distrika samihafa. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
kisedrasendra (nitranga in-1) : Tsy kisedrasendra ny fitsontsoriky ny toe-karenan'i Shina. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Nangonina (nitranga in-1) : Fizakà-manana @Demotix (1/16/2013)
Nangonina ao amin'ny Pinterest ihany koa ireo sarin'ilay tondradrano. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
lalambe (nitranga in-1) : #BanjirJKT #JKTBanjir
‏@kalamkata Tondraka ny lalambe mahitsy mamakivaky ny tanàna. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
voakitikitika (nitranga in-1) : Ny ain-dehibe no voakitikitika raha vao resa-bola izany. (Ry matanjaka)
mora (nitranga in-5) : hotokanana indray ireo trano mora any Toamasina, tetikasan'ny fiadidiana ny Filohan'ny tetezamita natomboka ny volana novambra 2010. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
imbas (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
fampiasa (nitranga in-1) : Lasa teny filamatra sy fampiasa ny hoe fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ka nampirisihana ireo mpivady hiroso amin'ny fanafody fanabeazana aizana. (Fanabeazana « haizina »)
fitambaranny (nitranga in-1) : 20 ny fitambaranny lalao hotontosaina anio sy rahampitso. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
tampo (nitranga in-1) : Enina mianadahy izahay no iray tampo, sahirana ny ray aman-dreniko amin'ny fiantohana anay, ka hanampy azy ireo no tanjoko». (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
tanànan' (nitranga in-1) : mankalaza ny tsingerin- taona faha-90 ny tanànan' i Cachan any Frantsa. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
sepertinya (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
nokendaina (nitranga in-1) : Tanàn-dehibe maoderina ratsy tantana nandritra ny fotoana naharitra sy azon'ny orana tsy nitsahatra indray alina monja nokendaina. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
banjir (nitranga in-2) : Ini baru banjir 5 tahunan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
niantsoan' (nitranga in-1) : Tamin'ny Jolay 2012 no niantsoan'ny mpampianatra oniversite ny hanaovana ny politikan'ny zaza roa; tamin'ny Nov 2012, mpahay toe-karena mihoatra ny 30 no nandrisika ny hamaranana ny politikan'ny zaza roa. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
onivrsite (nitranga in-1) : Maro ny mpampianatra onivrsite sy mpanay toe-karena no mandresy lahatra fa niteraka andian'olana lavitr'ezaka ny politikan'ny zaza tokana, ao anatin'izany ny fahanteran'ny mponina sy ny tsy fitovitovian'isan'ny lahy sy ny vavy. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Antanimora (nitranga in-1) : Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora avokoa izy ireo. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
salah (nitranga in-2) : @Posma_ Jokowi-Ahok menghadapi salah tantangan terbesar Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Bngrc (nitranga in-1) : Ho azo antoka kokoa ny fanapahan-kevitra horaisina ary hirindra kokoa ny asa, vokatr'izany”, hoy ny fanazavan'ny Dr Randriatahina Raymond, lefitry ny sekretera mpana- tanteraky ny Bngrc, momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
hotontosaina (nitranga in-1) : 20 ny fitambaranny lalao hotontosaina anio sy rahampitso. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
tsaratsara (nitranga in-1) : “Ny tsy fahampian'ny fanomanana sy ny fahadisoana teo amin'ny tetika nampiasaina no antony tsy nahazoana vokatra tsaratsara kokoa satria tokony ho voatana ihany ny laharana faharoa”, hoy i Hajanirina Andriamparany, tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny “marathon”, nitantara ny diany tany Bamako. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
anatry (nitranga in-1) : Nonina nandritra ny volana maromaro tao amin'ny tranon'ny mpi- anatry ny oniversite malagasy nanomboka ny oktobra 1963 mihitsy moa izy enina mianadahy nandrafitra ny tarika. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
Xijin (nitranga in-1) : Ny lehiben'ny Fanoratana ao amin'ny Global Times Hu Xijin [Hz] no nandray ny fitarihana izany:
Faralala (nitranga in-2) : Faralala. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
gede (nitranga in-1) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Zintsay (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
Raymond (nitranga in-1) : Ho azo antoka kokoa ny fanapahan-kevitra horaisina ary hirindra kokoa ny asa, vokatr'izany”, hoy ny fanazavan'ny Dr Randriatahina Raymond, lefitry ny sekretera mpana- tanteraky ny Bngrc, momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
Antsirabe (nitranga in-2) : notontosaina omaly tany amin'ny sekolin'ny polisim-pirenena tany Antsirabe ny fametrahana ambany faneva ireo mpianatra ho »inspec-teur » sy »agent de police », andiany faha-20 nampiton-draina ny anarana hoe »Raitra ». (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
Journal (nitranga in-1) : Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
harusnya (nitranga in-1) : @Oepaij Wilayah yang harusnya jadi zona luahan air (discharge) malah dibikin pemukiman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
koridor (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
mahofaho (nitranga in-1) : Mifa- mahofaho ihany aloha ity toe-draharaha ity. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
depan (nitranga in-1) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
mereka (nitranga in-1) : Kalau butuh bisa kontak mereka. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Rakotoarivelo (nitranga in-1) : Rakotoarivelo Jean Marolahy, 22 taona, Anosibe Angarangarana
« Efa nanao fianarana momba ny fahandroana sakafo ihany aho teo aloha. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
Wilayah (nitranga in-1) : @Oepaij Wilayah yang harusnya jadi zona luahan air (discharge) malah dibikin pemukiman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Zavabita (nitranga in-1) : Zavabita goavana ao Shina ny fifehezana ny taha-piterahana avo. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Bemasoandro (nitranga in-1) : Fiaraha-miasan'ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny kaominina Ankadikely Ilafy ary Bemasoandro miaraka amin'ny Firenena Mikambana, amin'ny alalan'ny Unicef izany. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
ekipa (nitranga in-4) : “Nifanahantsahana ny fahaiza-manao teo amin'ireo ekipa efatra tafita hiatrika ny manasa-dalana tamin'ity”, hoy i Antsoniandro Randrianorosoa, tale teknika nasionalin'ny baolina lavalava. (Anjoron- »CAN »)
terobosan (nitranga in-1) : Semoga terobosan solusinya berjalan baik #banjirJKT
@Posma_ Samy miatrika ny fanamby henjana ao Jakarta na i Jokowi (Ben'ny Tanàna) sy Ahok (Lefitry ny Ben'ny Tanàna). (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Andohatampenaka (nitranga in-1) : Hiatrika ny lalao famaranana amin' ny ekipan'Analamanga, izay mbola tsy nisedra faharesena hatrany am-boalohany, izy ireo rahampitso eny amin'ny kianja Makis Andohatampenaka. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
bilaoginy (nitranga in-1) : Manadihady ao amin'ny bilaoginy ny mpikaroka ara-piaraha-monina Yi Fuxian[zh]:
现在很多人认为城市化可以保证中国经济继续高速增长。本文从人口结构分析，中国不可能重现日、台、韩当年那种经济奇迹。中国现在经济放缓并非偶然。城市化也是生育率跳跃性下降的过程，中国需要果断停止计划生育。 Maro ny olona no mieritreritra fa afa-miantoka ny fitohizan'ny fitomboan-karenan'i Shina ny fanitarana ny tanàn-dehibe. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Barphil (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo
nampirisihana (nitranga in-1) : Lasa teny filamatra sy fampiasa ny hoe fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ka nampirisihana ireo mpivady hiroso amin'ny fanafody fanabeazana aizana. (Fanabeazana « haizina »)
hitsarana (nitranga in-1) : Zavatra maro no hitsarana ireo polisy ireo mandritra ny fiofanana ataony, indrindra fa ny fitondran-tena. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
fanehoankevitra (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
nalefa (nitranga in-1) : « 302 no isan'izy ireo tany am-piandohana fa ny iray kosa nalefa nody rehefa hita fa nitondra vohoka. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
solusinya (nitranga in-1) : Semoga terobosan solusinya berjalan baik #banjirJKT
tale (nitranga in-4) : Navoitran'i Heiko Schlittke, tale jeneralin'ny Airtel ny endrika fampandrosoana entin'ny fahamoran'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fampidirana tambanjotra toy itony. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
maintain (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
The policy should be a long-term one, and its primary goal is to maintain a low birth rate and be gradually perfected. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
terbesar (nitranga in-1) : @Posma_ Jokowi-Ahok menghadapi salah tantangan terbesar Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
basket (nitranga in-7) : ekipa iray nilalao basket teny Andraisoro
Ho voky basket izay tonga eny Andraisoro, amin' ity faran'ny herinandro ity, ao anatin'ny «Fety du basikety» andiany faharoa, kara- karain'ny AT2B na ny Andraisoro Tia Baskety ball. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
Hevery (nitranga in-1) : Heverin'ireto mpiara-miombon'antoka amin'ny fikaroham-bahaolana amin' ny famahana ny krizy ireto fa «ireo raiamandreny am-panahy mpitarika ny Ffkm ihany no azo antoka fa hahavita ny firoso-ana amin'ny fampihavanana ny samy Malagasy sy hitondra vahaolana mahomby amin' izay toe-draharaha politika eto amintsika izay». (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
Ursula (nitranga in-2) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
banget (nitranga in-1) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
JCSA (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo
orang (nitranga in-1) : Sama aja nyuruh orang ngebangun rumah di empang. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
wajah (nitranga in-1) : Johannes Silentio Hari-hari ini wajah paradoks Jakarta terkuak lebar. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
butuh (nitranga in-1) : Kalau butuh bisa kontak mereka. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Benjamin (nitranga in-2) : MIAMPY ISA HATRANY > Nanamafy ny fanambarana maha-kasika ny ho firotsahany amin'ny fifidianana Filo-ham-pirenena i Benjamin Radavidson Andriam-parany. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
notsindromina (nitranga in-1) : Nohazavain'ny mpitsabo anefa fa mety hiteraka vokatra tsy dia ampo-izina loatra amin'ny olombelona ny fihinanana ny tavin-kenan-kisoa avy amin'izany biby nihinana na notsindromina fanabeazana aizana izany. (Fanabeazana « haizina »)
Sadc (nitranga in-3) : Araka ny fantatra dia efa tafapetraka eo anivon'ny tribonaly iraisam-pirenena sy any amin'ny vondrona Sadc ny fitorian'ny ankolafy Ravalo-manana ny Filohan'ny tete-zamita, Andry Rajoelina, mahakasika ny voalaza fa «fanonganam-panjakana niarahan'ny Tafika sy ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona tamin'ny taona 2009 ». (Sombiny)
police (nitranga in-1) : notontosaina omaly tany amin'ny sekolin'ny polisim-pirenena tany Antsirabe ny fametrahana ambany faneva ireo mpianatra ho »inspec-teur » sy »agent de police », andiany faha-20 nampiton-draina ny anarana hoe »Raitra ». (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
nahataitra (nitranga in-1) : Ankehitriny indray dia nahataitra ny nahare fa maro ny mpiompy manindrona na manome fanafody fandrin- dram-piterahana an'ireo kisoa. (Fanabeazana « haizina »)
Anatihazo (nitranga in-1) : Rasoanaivo Noroniaina Sahoby, 20 taona, Anatihazo Isotry
hiasa (nitranga in-1) : Varotra hani-masaka sy mofomamy no tetikasa haoriko, hikendry mba ho afaka hiasa tena fa tsy hiankin-doha miasa aman'olona na hanangana orinasa mihitsy aho any aoriana any ». (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
Bidvest (nitranga in-1) : CAN vita mialoha
Vita sahady ny fifaninanana ho an'ilay irakiraka maraokanina Mehdi Namli vokatry ny dona mafy nahazo ny lohaliny, nandritra ny lalao ara-pirahalahiana nihaonan'izy ireo tamin'ny Bidvest Wits. (Anjoron- »CAN »)
crew (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
Lapangan (nitranga in-2) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Jennie (nitranga in-1) : Jennie S. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Notanana (nitranga in-1) : Notanana ao amin'ny biraon'ny polisy etsy Anosy ireto teratany vahiny ireto. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
Santa (nitranga in-1) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
policy (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
Nanana (nitranga in-1) : « Nanana vaovao feno ireo jiolahy maha-kasika ilay olona hotafihin'izy ireo teny Ambo-hitrarahaba, ny alin'ny alatsinainy 7 janoary. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
piofanana (nitranga in-1) : Mbola vitsy amin'ireo mpampiofana ireo indray anefa no manana fahaizana amam-pahalalana feno mahakasika ireo lalam- piofanana ireo, hany ka tsy dia mahomby ireo mpianatra rehefa tonga ao anatin'ny tontolon'ny asa. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
LovaZen (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
2010 (nitranga in-1) : hotokanana indray ireo trano mora any Toamasina, tetikasan'ny fiadidiana ny Filohan'ny tetezamita natomboka ny volana novambra 2010. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
2013 (nitranga in-4) : nANAMPY TOSIKA > Sady nidera ny Filohan' ny tetezamita, Andry Rajoelina tamin'ny fana- pahan-kevitra noraisiny no mbola nanamafy ny fanambaran'ny Von-drona Sadc ny amin'ny tokony hitazonana ny tetiandrom-pifidianana ho amin'ny volana mey 2013 ny sekretera jenera- lin'ny Firenena mikambana, Ban-ki Moon. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
2012 (nitranga in-3) : Mbola mijoro any an-toerana io trano nankalaza ny faha-50 taonany tamin'ny 31 marsa 2012 io. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
2nde (nitranga in-1) : Niala fianarana aho teo amin'ny kilasy 2nde. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
nangataka (nitranga in-1) : Voalaza ihany koa fa «tamin'ireo fivoriana tany Maputo ka hatramin'ny fihaonana tany Seychelles no nangataka ny hanome-zana antoka azy ny amin'ny tsy tokony hisian'ny fanenjahana azy tamin'ireo tranga politika teto amintsika ny Filohan'ny tetezamita». (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
Pinterest (nitranga in-1) : Fizakà-manana @Demotix (1/16/2013)
primary (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
mitomboa (nitranga in-1) : Efa tsy lamaody efa hatramin'ny am-polony taona eo izao ny « mitomboa mamenoa ny tany » ho an'ny mpivady malagasy. (Fanabeazana « haizina »)
Nilaza (nitranga in-1) : Nilaza ihany koa ry zareo fa tsy hanan-janaka maro ny Shinoa na tsy hisy aza ilay politika. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
faratampon' (nitranga in-1) : tsy azo hozongozonina ny politikan'ny zaza tokana ao Shina, hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra faratampon'ny fandrindram-pianakaviana iray tamin'ny 14 Janoary 2013. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
dona (nitranga in-1) : CAN vita mialoha
azon' (nitranga in-2) : taorian'ny laharana fahadimy azon'i Hajanirina Andriamparany, nandritra ny hazakazaka lavitra ezaka “Marathon de BOA” tany Bamako Mali, dia nankasitraka azy ny banky BOA Madagascar, ka nanolotra vola mitentina iray tapitrisa ariary. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
tera (nitranga in-1) : Ora vitsy taorian'izay dia nitondra taratasy iray hafa avy amin'ny doko- tera indray ilay renim-pianakaviana nilaza fa tsy simba indray ilay zaza. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
Café (nitranga in-1) : Hotanterahina, etsy amin'ny Tana Arts Café ny «Basy gasy» ifangaroan' ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
tratry (nitranga in-2) : Nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona tetsy amin'ny Central Hôtel, tetsy Tsaralalàna, omaly no nanavaozana ny mpitantana ny sendikan'ny mpamokatra fampisehoana an-tsehatra sy rakikira ary rakitsary. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
Rasoanaivo (nitranga in-1) : Rasoanaivo Noroniaina Sahoby, 20 taona, Anatihazo Isotry
nihinana (nitranga in-1) : Nohazavain'ny mpitsabo anefa fa mety hiteraka vokatra tsy dia ampo-izina loatra amin'ny olombelona ny fihinanana ny tavin-kenan-kisoa avy amin'izany biby nihinana na notsindromina fanabeazana aizana izany. (Fanabeazana « haizina »)
bantu (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
Arts (nitranga in-1) : Hotanterahina, etsy amin'ny Tana Arts Café ny «Basy gasy» ifangaroan' ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
Network (nitranga in-2) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
kojakojany (nitranga in-1) : Nanolotra fitaovana hoenti-miasa, nahitana solosaina sy ny kojakojany, tabilao… ho an' ny ivon-toerana fanangonana sy fandiniham-baovao (Cervo) eo anivon'ny birao nasionaly momba ny fitantanana ny loza voajanahary (Bngrc) ny Coopération Française omaly. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
ilànao (nitranga in-1) : Mifandraisa amin'izy ireo raha misy ilànao fanampiana. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
berjalan (nitranga in-1) : Semoga terobosan solusinya berjalan baik #banjirJKT
nitondra (nitranga in-4) : teratany kaomôrianina efatra no tratran' ny polisy miaro ny sisin-tany tetsy Ivato ny alin'ny alakamisy teo, nitondra pasipaoro sandoka teny amin'ny seranam-piaramandina Ivato. (Tapatapany)
membantu (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
Banteng (nitranga in-2) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
mpanay (nitranga in-1) : Maro ny mpampianatra onivrsite sy mpanay toe-karena no mandresy lahatra fa niteraka andian'olana lavitr'ezaka ny politikan'ny zaza tokana, ao anatin'izany ny fahanteran'ny mponina sy ny tsy fitovitovian'isan'ny lahy sy ny vavy. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
semalaman (nitranga in-1) : Kota metropolis-modern yang berkali-kali salah urus dan bisa lumpuh hanya karena hujan semalaman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
handoavana (nitranga in-1) : Koa arakaraka ny ifanarahan'ny roa tonta ny handoavana ny ambiny, saingy tsy tokony hihoatra ny dimy taona », raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
DoubleNN (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
China (nitranga in-1) : Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
Nangony (nitranga in-2) : Nangonin'i Roméo Andriamihaja. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
sobadistrika (nitranga in-1) : Voatatitra fa amin'ireo sobadistrika 44 ao Jakarta dia 27 no tondraky ny rano. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
fampiofanana (nitranga in-1) : Saika tsy mikendry afa-tsy ny fampiofanana be mpitady izy ireo, fa tsy mba mifanaraka amin'ny filàn'ny tsenan'ny asa akory. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
nosoloiny (nitranga in-1) : « Ny pasipaoro nentin'izy ireo dia ara-dalàna fa ny sary no nosoloiny. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
Randrianorosoa (nitranga in-1) : “Nifanahantsahana ny fahaiza-manao teo amin'ireo ekipa efatra tafita hiatrika ny manasa-dalana tamin'ity”, hoy i Antsoniandro Randrianorosoa, tale teknika nasionalin'ny baolina lavalava. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
hialana (nitranga in-1) : Nanomboka vao haingana tao ny adi-hevitra raha tonga ny fotoana hialana amin'ity politika ity, izay narehitry ny fahaleovan'ny olona ny ambaratongan-drafitra amin'ny fanerena hanaovana fanalan-jaza. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
menghadapy (nitranga in-1) : @Posma_ Jokowi-Ahok menghadapi salah tantangan terbesar Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
tenany (nitranga in-1) : Mijaly ihany koa ireo indostria vao mahita teknisiana ambony na injeniera manana traikefa sy fahaiza-manao momba ny elektronika, ny fihetsi- tenany, ny elektromekanika. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
Navoitran' (nitranga in-1) : Navoitran'i Heiko Schlittke, tale jeneralin'ny Airtel ny endrika fampandrosoana entin'ny fahamoran'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fampidirana tambanjotra toy itony. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
ianjadian' (nitranga in-1) : Hivoaka amin' ny sary na tabilao avokoa mantsy manomboka izao, amin'ny alalan'ny « logiciel » vaovao natolotra, ny antontam-baovao ampitaina avy any amin'ireo toerana isanisany ianjadian'ny rivo- doza na ny loza voajanahary. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
Rajaobelina (nitranga in-1) : Ho an' ny orinasa, « tsy ampy ny teknika, ny fikirizana amin' ny fikarohana mpanjifa, ny fahaiza-miresaka… hany ka ifampitadiavana ireo mpivarotra tena mahafehy ny teknikan'ny varotra ankehitriny », hoy Rajaobelina Francis, filohan' ny fikambanan'ireo tale misahana ny mpiasa eto Madagasikara. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
StumbleUpon (nitranga in-2) : com/JJZ6SYfo
hahita (nitranga in-1) : Tsy tiako ny hahita ny taranaka ahitana mponina roa na telo miliara ao amin'ny firenena iray. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Juliano (nitranga in-1) : Juliano R. (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
tanàna (nitranga in-5) : nizara fanomezana ho an'ireo olona tany amin'ny tanàna nandehanany ny Airtel
Mitohy ny ezak'ireo orinasam-pifandraisana ho fandrakofana ireo faritra tsy mbola tratran'ny tambajotram-pifandraisan-davitra. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Andraisoro (nitranga in-7) : ekipa iray nilalao basket teny Andraisoro
Angarangarana (nitranga in-2) : Voniniaina Marie Baldine, 27 taona, Anosibe Angarangarana
« Manambady aho ary niteraka mianadahy. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
haoriko (nitranga in-3) : Tsy ampy ny fidiram-bolanay, ka hanampiako azy eo amin'ny fiahiana ny tokantranonay dia ny fivarotana akoho fakana nofo no tetikasa haoriko. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
miliara (nitranga in-1) : Tsy tiako ny hahita ny taranaka ahitana mponina roa na telo miliara ao amin'ny firenena iray. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
hizaràna (nitranga in-1) : Mampiasa ny tenifototra #banjirJKT (tondradranon'i Jakarta) ireo mpisera ety anaty aterineto mba hizaràna vaovao mikasika ny fivoaran'ilay tondradrano any amin'ny distrika samihafa. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Rasendrahasina (nitranga in-2) : hanao fanambarana goavana momba ny raha- raham-pirenena ny Fian-gonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fjkm) amin'ny sabotsy 26 janoary izao, eny amin' ny Fiangonana Isotry Fiti-avana, araka ny nambaran'ny filohany, ny pasitera Rasendrahasina Lala afak'omaly. (Raharaham-pirenena – Hanao fanambarana ny Fjkm)
Ilafy (nitranga in-1) : Fiaraha-miasan'ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny kaominina Ankadikely Ilafy ary Bemasoandro miaraka amin'ny Firenena Mikambana, amin'ny alalan'ny Unicef izany. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
Soavimasoandro (nitranga in-1) : Notolorana mari- pahaizana fanamarinana ny nahavitany ny fiofanana momba ny fitantanan-draharaha ny tanora 40 mianadahy omaly, teny amin'ny ivon-toerana Ilaiko eny Soavimasoandro. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
fahampian' (nitranga in-1) : “Ny tsy fahampian'ny fanomanana sy ny fahadisoana teo amin'ny tetika nampiasaina no antony tsy nahazoana vokatra tsaratsara kokoa satria tokony ho voatana ihany ny laharana faharoa”, hoy i Hajanirina Andriamparany, tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny “marathon”, nitantara ny diany tany Bamako. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
ampiasay (nitranga in-1) : Dia ampiasain'ny sasany atao hitadiavam-bola sy hanaovana fahagagana hampitombo ny lanjan'ny kisoa izany ny fanafody fanabeazana aizana. (Fanabeazana « haizina »)
delicious (nitranga in-2) : com/JJZ6SYfo
Hotanterahina (nitranga in-1) : Hotanterahina, etsy amin'ny Tana Arts Café ny «Basy gasy» ifangaroan' ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
aloan' (nitranga in-1) : Amin'ny andiany manaraka dia mety aloan'ny BOA Madagascar mihitsy ny karamany mandritra ny fanomanana”, hoy i Jacques Dillet, tale jeneralin'ity banky ity, tetsy Antaninarenina omaly. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
sehatry (nitranga in-3) : Hisy ihany koa fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra omena ny mpanjifa, na eo amin'ny tontolon'ny fampisehoana izany na eo amin'ny sehatry ny rakikira sy ny rakitsary. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
zoron' (nitranga in-1) : Avy amin'ny zoron'ny firafitry ny mponina, tsy ho vitan'i Shina ny hanao fahagagana ara-toe-karena tahaka izay niainan'i Japan, Taiwan ary Korea. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Claude (nitranga in-1) : nametra-pialana
Niala tsy hitantana ny Léopards avy any RD Congo ilay teratany Frantsay, Claude Le Roy sy ny mpanampy azy, nefa tsy mbola nanomboka akory ny Can 2013 atsy Afrika Atsimo. (Anjoron- »CAN »)
mampitsahatra (nitranga in-1) : Mila mampitsahatra ny politikan'ny zaza tokana avy hatrany i Shina. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Nohazavay (nitranga in-1) : Nohazavain'ny mpitsabo anefa fa mety hiteraka vokatra tsy dia ampo-izina loatra amin'ny olombelona ny fihinanana ny tavin-kenan-kisoa avy amin'izany biby nihinana na notsindromina fanabeazana aizana izany. (Fanabeazana « haizina »)
tsenan' (nitranga in-2) : Saika tsy mikendry afa-tsy ny fampiofanana be mpitady izy ireo, fa tsy mba mifanaraka amin'ny filàn'ny tsenan'ny asa akory. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
Mehdy (nitranga in-1) : CAN vita mialoha
nifanesy (nitranga in-1) : Kenda ny asa fihariana ara-toekarena tao an-toerana taorian'ny roa andro nifanesy nisian'ny orana nikija tao Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hotafihy (nitranga in-1) : « Nanana vaovao feno ireo jiolahy maha-kasika ilay olona hotafihin'izy ireo teny Ambo-hitrarahaba, ny alin'ny alatsinainy 7 janoary. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
hujan (nitranga in-1) : Kota metropolis-modern yang berkali-kali salah urus dan bisa lumpuh hanya karena hujan semalaman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
nahazoana (nitranga in-1) : “Ny tsy fahampian'ny fanomanana sy ny fahadisoana teo amin'ny tetika nampiasaina no antony tsy nahazoana vokatra tsaratsara kokoa satria tokony ho voatana ihany ny laharana faharoa”, hoy i Hajanirina Andriamparany, tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny “marathon”, nitantara ny diany tany Bamako. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
hihaona (nitranga in-1) : Azo heverina fa ampy tsara ho azy ireo ny fanomanan-tena mialoha ny 22 janoary, fotoana hiakaran'izy ireo kianja hihaona amin'ny Tonizia eo amin'ny vondrona D. (Anjoron- »CAN »)
zanany (nitranga in-1) : Efa io mantsy no asan'ny reniko, izay miady irery mamelona anay telo mianadahy zanany. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
nandrafitra (nitranga in-1) : Nonina nandritra ny volana maromaro tao amin'ny tranon'ny mpi- anatry ny oniversite malagasy nanomboka ny oktobra 1963 mihitsy moa izy enina mianadahy nandrafitra ny tarika. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
dilaluy (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
tondraky (nitranga in-2) : Voatatitra fa amin'ireo sobadistrika 44 ao Jakarta dia 27 no tondraky ny rano. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Shinoa (nitranga in-2) : Niteraka adi-hevitra mafana hafa ao amin'ny media sosialy Shinoa ny fanambarana fitsipahana ny siosion-dresaka fa hajanona ny politikan'ny zaza tokana. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
juga (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
Randimbisoa (nitranga in-1) : Maro ny zavatra hitsa- rana azy ireo amin'izany ankoatra ny fanadinana farany toy ny fitondran-tena izay manana lanjan'isa 5 », hoy ny kaomisera divizionera Randimbisoa Blaise Richard, talen'ny sekoly. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
berpartisipasy (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
lebar (nitranga in-1) : Johannes Silentio Hari-hari ini wajah paradoks Jakarta terkuak lebar. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
tambanjotra (nitranga in-1) : Navoitran'i Heiko Schlittke, tale jeneralin'ny Airtel ny endrika fampandrosoana entin'ny fahamoran'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fampidirana tambanjotra toy itony. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
fitsontsoriky (nitranga in-1) : Tsy kisedrasendra ny fitsontsoriky ny toe-karenan'i Shina. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
rafitry (nitranga in-1) : Niantso ny hanitsiana haingana ilay politika ny mpiara-manorina ny Ctrip Liang Jianzhang[zh]:
mpianatry (nitranga in-1) : Tsy adinon'ny Airtel ny namatsy vary, nizara kilalao sy vatomamy ho an' ireo mpianatry ny Epp izay tohanany ao an-toerana. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
novantaniny (nitranga in-1) : Raha ny fitantaran'ilay renim-pianakaviana tany amin'ny fitoriana anefa dia « ilay zaza efa simba no novantaniny rehefa tonga izy ». (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
Andrianasoavina (nitranga in-1) : Noentin'ny ankolafy Ravalomanana ho porofo fanohanana ity fitoriana ity ny fanambarana sesilany nataon'ny lietnà-kolonely Charles Andrianasoavina mahakasika io raharaha io. (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
fanenjahana (nitranga in-1) : Voalaza ihany koa fa «tamin'ireo fivoriana tany Maputo ka hatramin'ny fihaonana tany Seychelles no nangataka ny hanome-zana antoka azy ny amin'ny tsy tokony hisian'ny fanenjahana azy tamin'ireo tranga politika teto amintsika ny Filohan'ny tetezamita». (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
Ialànay (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
karena (nitranga in-1) : Kota metropolis-modern yang berkali-kali salah urus dan bisa lumpuh hanya karena hujan semalaman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hanya (nitranga in-1) : Kota metropolis-modern yang berkali-kali salah urus dan bisa lumpuh hanya karena hujan semalaman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
paradoks (nitranga in-1) : Johannes Silentio Hari-hari ini wajah paradoks Jakarta terkuak lebar. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
atleta (nitranga in-1) : “Mila tohana ny atleta mahavita zavatra tahaka izao. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
pasitera (nitranga in-3) : hanao fanambarana goavana momba ny raha- raham-pirenena ny Fian-gonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fjkm) amin'ny sabotsy 26 janoary izao, eny amin' ny Fiangonana Isotry Fiti-avana, araka ny nambaran'ny filohany, ny pasitera Rasendrahasina Lala afak'omaly. (Raharaham-pirenena – Hanao fanambarana ny Fjkm)
Ankadikely (nitranga in-1) : Fiaraha-miasan'ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny kaominina Ankadikely Ilafy ary Bemasoandro miaraka amin'ny Firenena Mikambana, amin'ny alalan'ny Unicef izany. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
nahazoan' (nitranga in-1) : Isan'ny anton'izao fanapahan-kevitra izao ny tsy mbola nahazoan'ireo mpilalao ny tambin- karama nampanantenain'ny fanjakana azy ireo. (Anjoron- »CAN »)
anoloan' (nitranga in-1) : com/JJZ6SYfo
‏@KartuPos Bibilava be tsikaritra teo anoloan'ny sekoly Saint Ursula akaikin'ny Lapangan Banteng (fanamarihana: kianja fanaovana fanatanjahantena). (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
sekitar (nitranga in-2) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
notifiry (nitranga in-1) : Nipoitra teo am-baravarankely teo ambony rihana avy eo ilay tompon-trano, ka avy hatrany dia notifirin'izy ireo,dia voa teo amin'ny tendany », hoy ny fitantaran'ny lehilahy iray monina eo amin'ny manodidina, nitsikilo avy eo am-baravaran-kely ny fizotry ny fanafihana. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
Richard (nitranga in-1) : Maro ny zavatra hitsa- rana azy ireo amin'izany ankoatra ny fanadinana farany toy ny fitondran-tena izay manana lanjan'isa 5 », hoy ny kaomisera divizionera Randimbisoa Blaise Richard, talen'ny sekoly. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
setengah (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Niofana (nitranga in-1) : « Niofana nandritra ny 40 ora izy ireo. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
vavivavy (nitranga in-1) : Mety haha vavivavy toetra hono. (Fanabeazana « haizina »)
nandrisika (nitranga in-1) : Tamin'ny Jolay 2012 no niantsoan'ny mpampianatra oniversite ny hanaovana ny politikan'ny zaza roa; tamin'ny Nov 2012, mpahay toe-karena mihoatra ny 30 no nandrisika ny hamaranana ny politikan'ny zaza roa. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
leher' (nitranga in-1) : Ao Indonezia ihany izy io no refesina amin'ny ‘mata kaki, betis, dengkul, dada, pinggang, leher' (hakitrokely, ranjo, lohalika, valahana, tratra ary tenda). (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Jesoa (nitranga in-1) : hanao fanambarana goavana momba ny raha- raham-pirenena ny Fian-gonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fjkm) amin'ny sabotsy 26 janoary izao, eny amin' ny Fiangonana Isotry Fiti-avana, araka ny nambaran'ny filohany, ny pasitera Rasendrahasina Lala afak'omaly. (Raharaham-pirenena – Hanao fanambarana ny Fjkm)
Makis (nitranga in-1) : Hiatrika ny lalao famaranana amin' ny ekipan'Analamanga, izay mbola tsy nisedra faharesena hatrany am-boalohany, izy ireo rahampitso eny amin'ny kianja Makis Andohatampenaka. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
operasy (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
nampidiran' (nitranga in-1) : Raha izay no izy dia tsy kisendrasendra ihany ny nampidiran'ny vondrona Sadc ny anaran'ny Filohan' ny tetezamita ho isan'ireo olona tokony hisitraka ny famotsoran-keloka tao ana-tin'ny fanambarana nataon' izy ireo farany. (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
Wits (nitranga in-1) : CAN vita mialoha
nenty (nitranga in-1) : « Ny pasipaoro nentin'izy ireo dia ara-dalàna fa ny sary no nosoloiny. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
1963 (nitranga in-1) : Nonina nandritra ny volana maromaro tao amin'ny tranon'ny mpi- anatry ny oniversite malagasy nanomboka ny oktobra 1963 mihitsy moa izy enina mianadahy nandrafitra ny tarika. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
irakiraka (nitranga in-1) : CAN vita mialoha
Slam (nitranga in-1) : Hotanterahina, etsy amin'ny Tana Arts Café ny «Basy gasy» ifangaroan' ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
Ben' (nitranga in-1) : Semoga terobosan solusinya berjalan baik #banjirJKT
Napetraky (nitranga in-1) : Napetraky ny Governora Joko Widodo ho amin'ny toeran'ny hamehana ny renivohitra hatramin'ny 27 Janoary. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
isaky (nitranga in-1) : Ity no ilay antsoinay hoe tondradrano isaky ny dimy taona. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
vitan' (nitranga in-1) : Avy amin'ny zoron'ny firafitry ny mponina, tsy ho vitan'i Shina ny hanao fahagagana ara-toe-karena tahaka izay niainan'i Japan, Taiwan ary Korea. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
napetraka (nitranga in-1) : “Efa misy ny fepetra napetraka amin'ny fiara mety eto amintsika. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
hikajiana (nitranga in-1) : Ny amin'ny tokony hikajiana ny solifara avoakan'ny fiara. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
ifangaroan' (nitranga in-1) : Hotanterahina, etsy amin'ny Tana Arts Café ny «Basy gasy» ifangaroan' ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
Uctu (nitranga in-1) : Misy tolotra aorian' ny varotra amin'ny fanamboarana azy avokoa ireo fiara hita “, hoy kosa ny avy amin'ny Uctu. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
sedan (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Jacques (nitranga in-2) : Raha ny voalazan-dRakotoarisoa Jean Jacques, talen'ny kabinetran'ny minisitera Fampianarana ambony dia 50 eo ireo efa nahazo fankatoavana hisokatra sy hampianatra. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
Google (nitranga in-2) : Mandritra izany, Dest, mpampiasa Google dia nanangana sarintany Google iray hanarahana ilay tondradrano goavana ao Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hataoko (nitranga in-1) : Raberiaka Nomena, 16 taona, Ambohimanarina
« Varotra voanjo no hataoko. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
hajanona (nitranga in-1) : Niteraka adi-hevitra mafana hafa ao amin'ny media sosialy Shinoa ny fanambarana fitsipahana ny siosion-dresaka fa hajanona ny politikan'ny zaza tokana. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
nyuruh (nitranga in-1) : Sama aja nyuruh orang ngebangun rumah di empang. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
divizionera (nitranga in-1) : Maro ny zavatra hitsa- rana azy ireo amin'izany ankoatra ny fanadinana farany toy ny fitondran-tena izay manana lanjan'isa 5 », hoy ny kaomisera divizionera Randimbisoa Blaise Richard, talen'ny sekoly. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
naharesy (nitranga in-1) : Naharitra taona maro ihany anefa vao naharesy lahatra ny fianakaviana malagasy io fanabeazana aizana io. (Fanabeazana « haizina »)
yang (nitranga in-3) : Kota metropolis-modern yang berkali-kali salah urus dan bisa lumpuh hanya karena hujan semalaman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
terkuak (nitranga in-1) : Johannes Silentio Hari-hari ini wajah paradoks Jakarta terkuak lebar. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Naiditra (nitranga in-1) : Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora avokoa izy ireo. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
Carolina (nitranga in-1) : com/JJZ6SYfo
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
kabinetran' (nitranga in-1) : Raha ny voalazan-dRakotoarisoa Jean Jacques, talen'ny kabinetran'ny minisitera Fampianarana ambony dia 50 eo ireo efa nahazo fankatoavana hisokatra sy hampianatra. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
pahaizana (nitranga in-1) : Notolorana mari- pahaizana fanamarinana ny nahavitany ny fiofanana momba ny fitantanan-draharaha ny tanora 40 mianadahy omaly, teny amin'ny ivon-toerana Ilaiko eny Soavimasoandro. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
nankalaza (nitranga in-1) : Mbola mijoro any an-toerana io trano nankalaza ny faha-50 taonany tamin'ny 31 marsa 2012 io. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
Zazavavikely (nitranga in-1) : Zazavavikely iray vao 3 taona monja indray no voalaza fa nosimbain'ny tovolahy 22 taona teny Itaosy, afak'omaly. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
Rasoloarison (nitranga in-1) : Nangonin'i Monica Rasoloarison. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
alay (nitranga in-1) : Saingy tsy tokony alain'ny Vaomieran'ny Mponina sy ny Fandrindra-pianakaviana. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
baik (nitranga in-1) : Semoga terobosan solusinya berjalan baik #banjirJKT
Kalau (nitranga in-1) : Kalau butuh bisa kontak mereka. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
ahafahana (nitranga in-1) : «Ny fivondronana ao anatin'ny sendika ihany no sehatra iray hanambarana ny hery ka ahafahana miatrika ireo sehatra samihafa amin'ny asa atao», hoy i Mamy Do Sôl. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
urus (nitranga in-1) : Kota metropolis-modern yang berkali-kali salah urus dan bisa lumpuh hanya karena hujan semalaman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Semoga (nitranga in-1) : Semoga terobosan solusinya berjalan baik #banjirJKT
Japan (nitranga in-1) : Avy amin'ny zoron'ny firafitry ny mponina, tsy ho vitan'i Shina ny hanao fahagagana ara-toe-karena tahaka izay niainan'i Japan, Taiwan ary Korea. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
hanamarika (nitranga in-1) : Anisan'ny hanamarika ity «Basy gasy» ity ihany koa ny tontolon'ny sary pika hiarahana amin'i Rija Solo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
should (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
rakikira (nitranga in-2) : Nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona tetsy amin'ny Central Hôtel, tetsy Tsaralalàna, omaly no nanavaozana ny mpitantana ny sendikan'ny mpamokatra fampisehoana an-tsehatra sy rakikira ary rakitsary. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
Silakan (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
hataon' (nitranga in-1) : Mialoha izany dia hisy koa fiaraha- mivavaka hataon'ny Fjkm eny Antsahamanitra rahampitso. (Raharaham-pirenena – Hanao fanambarana ny Fjkm)
traikefa (nitranga in-1) : Mijaly ihany koa ireo indostria vao mahita teknisiana ambony na injeniera manana traikefa sy fahaiza-manao momba ny elektronika, ny fihetsi- tenany, ny elektromekanika. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
Unicef (nitranga in-1) : Fiaraha-miasan'ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny kaominina Ankadikely Ilafy ary Bemasoandro miaraka amin'ny Firenena Mikambana, amin'ny alalan'ny Unicef izany. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
Antsoniandro (nitranga in-1) : “Nifanahantsahana ny fahaiza-manao teo amin'ireo ekipa efatra tafita hiatrika ny manasa-dalana tamin'ity”, hoy i Antsoniandro Randrianorosoa, tale teknika nasionalin'ny baolina lavalava. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
stop (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
boatra (nitranga in-1) : Mpanam- boatra bisikileta ny asan'ny vadiko. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
Ambohidrabiby (nitranga in-1) : lozam-pifamo-ivoizana > Lehilahy iray 40 taona nitondra môtô no naratra mafy nifandona tamin'ny kamiao teo Ambohidrabiby omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora. (Tapatapany)
hanarahana (nitranga in-1) : Mandritra izany, Dest, mpampiasa Google dia nanangana sarintany Google iray hanarahana ilay tondradrano goavana ao Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Ireto (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
takiana (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'izany fepetra takiana amin'ny fiara ampiasaina eto amintsika izany ny fitsinjovana ny momba ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mponina. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
sendikan' (nitranga in-3) : miaiky ireo mpikambana eo anivon'ilay vondrona poli- tika mpisava lalana amin'ny fanatanterahana ny diniky ny samy Malagasy (Gec) sy ireo mpikambana eo anivon'ny fiombonamben'ireo sendikan' ny mpiasam-panjakana ambony fa «mbola tsy voavaha tante-raka ireo olana politika eto Madagasikara na dia tsy ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena aza ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana». (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
nitantara (nitranga in-1) : “Ny tsy fahampian'ny fanomanana sy ny fahadisoana teo amin'ny tetika nampiasaina no antony tsy nahazoana vokatra tsaratsara kokoa satria tokony ho voatana ihany ny laharana faharoa”, hoy i Hajanirina Andriamparany, tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny “marathon”, nitantara ny diany tany Bamako. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
nitsahatra (nitranga in-1) : Tanàn-dehibe maoderina ratsy tantana nandritra ny fotoana naharitra sy azon'ny orana tsy nitsahatra indray alina monja nokendaina. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
zazatokana (nitranga in-1) : pikan-tsarin'ny fitaterana ny zazatokana ho ”amperora kely” ao Shina (avy amin'ny youku)
Ao amin'ny fitsapa-kevitra nataon'ny Weibo aza dia mihoatra ny 12. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Platinium (nitranga in-1) : Ara-pirahalahiana
tika (nitranga in-1) : miaiky ireo mpikambana eo anivon'ilay vondrona poli- tika mpisava lalana amin'ny fanatanterahana ny diniky ny samy Malagasy (Gec) sy ireo mpikambana eo anivon'ny fiombonamben'ireo sendikan' ny mpiasam-panjakana ambony fa «mbola tsy voavaha tante-raka ireo olana politika eto Madagasikara na dia tsy ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena aza ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana». (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
Jentilisa (nitranga in-1) : Mpanoratra Abby · Nandika Jentilisa
Ular (nitranga in-1) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
ireto (nitranga in-4) : Heverin'ireto mpiara-miombon'antoka amin'ny fikaroham-bahaolana amin' ny famahana ny krizy ireto fa «ireo raiamandreny am-panahy mpitarika ny Ffkm ihany no azo antoka fa hahavita ny firoso-ana amin'ny fampihavanana ny samy Malagasy sy hitondra vahaolana mahomby amin' izay toe-draharaha politika eto amintsika izay». (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Voniniaina (nitranga in-1) : Voniniaina Marie Baldine, 27 taona, Anosibe Angarangarana
baru (nitranga in-1) : Ini baru banjir 5 tahunan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
betis (nitranga in-1) : Ao Indonezia ihany izy io no refesina amin'ny ‘mata kaki, betis, dengkul, dada, pinggang, leher' (hakitrokely, ranjo, lohalika, valahana, tratra ary tenda). (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
namela (nitranga in-1) : Tsy nanampo na inona na inona ny reniny izay namela ilay zaza tamin'ilay tovolahy irery tao an-tranon'izy ireo, noho izy nandeha niantsena. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
nadika (nitranga in-2) : com/JJZ6SYfo
Tribonaly (nitranga in-1) : ireo mpitsara eo anivon'ny Tribonaly iraisam-pirenena
Misoko mangina. (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
Afrika (nitranga in-2) : nametra-pialana
jady (nitranga in-1) : @Oepaij Wilayah yang harusnya jadi zona luahan air (discharge) malah dibikin pemukiman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
mpampiofana (nitranga in-1) : Mbola vitsy amin'ireo mpampiofana ireo indray anefa no manana fahaizana amam-pahalalana feno mahakasika ireo lalam- piofanana ireo, hany ka tsy dia mahomby ireo mpianatra rehefa tonga ao anatin'ny tontolon'ny asa. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
isanisany (nitranga in-2) : Hivoaka amin' ny sary na tabilao avokoa mantsy manomboka izao, amin'ny alalan'ny « logiciel » vaovao natolotra, ny antontam-baovao ampitaina avy any amin'ireo toerana isanisany ianjadian'ny rivo- doza na ny loza voajanahary. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
rumah (nitranga in-1) : Sama aja nyuruh orang ngebangun rumah di empang. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
nampanantenay (nitranga in-1) : Isan'ny anton'izao fanapahan-kevitra izao ny tsy mbola nahazoan'ireo mpilalao ny tambin- karama nampanantenain'ny fanjakana azy ireo. (Anjoron- »CAN »)
nozaray (nitranga in-1) : Na ny kaominina na ireo fokontany 19 ao anatiny dia samy nozarain'ity orinasam-pifandraisana ity finday rahateo hanehoana izany. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
sedang (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
Nanova (nitranga in-1) : Nanova ny fiainan'ny fokontany eny Andraisoro ny fisian' ity fifaninanana isan-kerinandro eo amin'ny basket ity. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
Info (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
reddit (nitranga in-2) : com/JJZ6SYfo
Central (nitranga in-1) : Nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona tetsy amin'ny Central Hôtel, tetsy Tsaralalàna, omaly no nanavaozana ny mpitantana ny sendikan'ny mpamokatra fampisehoana an-tsehatra sy rakikira ary rakitsary. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
Randriatahina (nitranga in-1) : Ho azo antoka kokoa ny fanapahan-kevitra horaisina ary hirindra kokoa ny asa, vokatr'izany”, hoy ny fanazavan'ny Dr Randriatahina Raymond, lefitry ny sekretera mpana- tanteraky ny Bngrc, momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
namoaka (nitranga in-1) : Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
tantangan (nitranga in-1) : @Posma_ Jokowi-Ahok menghadapi salah tantangan terbesar Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Mifandraisa (nitranga in-1) : Mifandraisa amin'izy ireo raha misy ilànao fanampiana. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Team (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo
Ahok (nitranga in-1) : Semoga terobosan solusinya berjalan baik #banjirJKT
kandidà (nitranga in-1) : miaiky ireo mpikambana eo anivon'ilay vondrona poli- tika mpisava lalana amin'ny fanatanterahana ny diniky ny samy Malagasy (Gec) sy ireo mpikambana eo anivon'ny fiombonamben'ireo sendikan' ny mpiasam-panjakana ambony fa «mbola tsy voavaha tante-raka ireo olana politika eto Madagasikara na dia tsy ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena aza ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana». (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
Hanokatra (nitranga in-1) : « Hanokatra sekoly ho an'ny basket no tanjona, mba ho matihanina ny mpilalao », hoy Rabenjamina Fanja. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
Instapaper (nitranga in-2) : com/JJZ6SYfo
hampitombo (nitranga in-1) : Dia ampiasain'ny sasany atao hitadiavam-bola sy hanaovana fahagagana hampitombo ny lanjan'ny kisoa izany ny fanafody fanabeazana aizana. (Fanabeazana « haizina »)
Ambohitsorohitra (nitranga in-1) : Araka ny tsilian-tsofina dia tafiditra ao anatin'ity fitorian'ireo akaiky ny mpanorina ny orinasa Tiko ny Filohan' ny tetezamita ity ihany koa ny raharaha 26 janoary 2009 sy ny mahakasika ny 7 febroary teny Ambohitsorohitra. (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
fiangaliana (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
goal (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
hitondra (nitranga in-2) : Heverin'ireto mpiara-miombon'antoka amin'ny fikaroham-bahaolana amin' ny famahana ny krizy ireto fa «ireo raiamandreny am-panahy mpitarika ny Ffkm ihany no azo antoka fa hahavita ny firoso-ana amin'ny fampihavanana ny samy Malagasy sy hitondra vahaolana mahomby amin' izay toe-draharaha politika eto amintsika izay». (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
ifampitadiavana (nitranga in-1) : Ho an' ny orinasa, « tsy ampy ny teknika, ny fikirizana amin' ny fikarohana mpanjifa, ny fahaiza-miresaka… hany ka ifampitadiavana ireo mpivarotra tena mahafehy ny teknikan'ny varotra ankehitriny », hoy Rajaobelina Francis, filohan' ny fikambanan'ireo tale misahana ny mpiasa eto Madagasikara. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
ifanarahan' (nitranga in-1) : Koa arakaraka ny ifanarahan'ny roa tonta ny handoavana ny ambiny, saingy tsy tokony hihoatra ny dimy taona », raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
natomboka (nitranga in-1) : hotokanana indray ireo trano mora any Toamasina, tetikasan'ny fiadidiana ny Filohan'ny tetezamita natomboka ny volana novambra 2010. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
hahavita (nitranga in-1) : Heverin'ireto mpiara-miombon'antoka amin'ny fikaroham-bahaolana amin' ny famahana ny krizy ireto fa «ireo raiamandreny am-panahy mpitarika ny Ffkm ihany no azo antoka fa hahavita ny firoso-ana amin'ny fampihavanana ny samy Malagasy sy hitondra vahaolana mahomby amin' izay toe-draharaha politika eto amintsika izay». (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
teknikan' (nitranga in-1) : Ho an' ny orinasa, « tsy ampy ny teknika, ny fikirizana amin' ny fikarohana mpanjifa, ny fahaiza-miresaka… hany ka ifampitadiavana ireo mpivarotra tena mahafehy ny teknikan'ny varotra ankehitriny », hoy Rajaobelina Francis, filohan' ny fikambanan'ireo tale misahana ny mpiasa eto Madagasikara. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
fampitsaharana (nitranga in-1) : Fa tsy midika ho fampitsaharana ny politikan'ny zaza tokana izany. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
làlana (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
jalur (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
amboninà (nitranga in-1) : Izany dia toy ny filazàna amin'ny olona hanangana trano eo amboninà honahona. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
nanasana (nitranga in-1) : Nandritra ny fitokanana ny fahitalavitra faharoa tao amin' ity tanàna ity no nanasana ny Les Surfs tamin'izany. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
nataon' (nitranga in-5) : «Efa mandeha any io fitoriana io, ka ho hita eo ihany izay ho tohiny», araka ny fanamarihana nataon'ny Me Hanitra Razafimanan-tsoa, mpisolovava ny orinasa Tiko avy amin'ny ankolafy Ravalomanana, omaly. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
hiarahana (nitranga in-1) : Anisan'ny hanamarika ity «Basy gasy» ity ihany koa ny tontolon'ny sary pika hiarahana amin'i Rija Solo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
path (nitranga in-1) : Dari path @BeckTum: pic. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
filàn' (nitranga in-2) : Saika tsy mikendry afa-tsy ny fampiofanana be mpitady izy ireo, fa tsy mba mifanaraka amin'ny filàn'ny tsenan'ny asa akory. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
Namly (nitranga in-1) : CAN vita mialoha
anton' (nitranga in-1) : Isan'ny anton'izao fanapahan-kevitra izao ny tsy mbola nahazoan'ireo mpilalao ny tambin- karama nampanantenain'ny fanjakana azy ireo. (Anjoron- »CAN »)
hamaranana (nitranga in-1) : Tamin'ny Jolay 2012 no niantsoan'ny mpampianatra oniversite ny hanaovana ny politikan'ny zaza roa; tamin'ny Nov 2012, mpahay toe-karena mihoatra ny 30 no nandrisika ny hamaranana ny politikan'ny zaza roa. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Coopération (nitranga in-1) : Nanolotra fitaovana hoenti-miasa, nahitana solosaina sy ny kojakojany, tabilao… ho an' ny ivon-toerana fanangonana sy fandiniham-baovao (Cervo) eo anivon'ny birao nasionaly momba ny fitantanana ny loza voajanahary (Bngrc) ny Coopération Française omaly. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
marobe (nitranga in-1) : Entina hanehoana ireo kolontsaina malagasy, nefa miaraka amin'ireo kolontsaina vahiny an-tanàn-dehibe sy maoderina no antony nampiarahana ireo talenta marobe ireo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
warga (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
hisitraka (nitranga in-1) : Raha izay no izy dia tsy kisendrasendra ihany ny nampidiran'ny vondrona Sadc ny anaran'ny Filohan' ny tetezamita ho isan'ireo olona tokony hisitraka ny famotsoran-keloka tao ana-tin'ny fanambarana nataon' izy ireo farany. (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
Roméo (nitranga in-2) : Roméo Andriamihaja. (Anjoron- »CAN »)
Notsindrian' (nitranga in-1) : Notsindrian'ity farany tao anatin'ny fanambarana nivoaka omaly koa ny amin'ny tokony hampiharana ireo an-dininy rehetra voafaritra ao anatin'ny sori-dalana. (Sombiny)
Làlana (nitranga in-1) : Avy eny amin'ny Làlana Dari. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
fiara (nitranga in-11) : Nitombina ny fahalalan'izy ireo mahakasika ilay raim-pianakaviana mpivarotra fiara vao avy nahalafo fiara tamin'io fotoana io. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
tanteraky (nitranga in-1) : Ho azo antoka kokoa ny fanapahan-kevitra horaisina ary hirindra kokoa ny asa, vokatr'izany”, hoy ny fanazavan'ny Dr Randriatahina Raymond, lefitry ny sekretera mpana- tanteraky ny Bngrc, momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
hanesorana (nitranga in-1) : 000 ny mpisera ny aterineto no mitazona fa izao no fotoana hanesorana ny politikan'ny zaza tokana raha 5000 ihany no mbola manohana ilay politika. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Jokowy (nitranga in-1) : Semoga terobosan solusinya berjalan baik #banjirJKT
hanehoana (nitranga in-2) : Na ny kaominina na ireo fokontany 19 ao anatiny dia samy nozarain'ity orinasam-pifandraisana ity finday rahateo hanehoana izany. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
tian' (nitranga in-1) : Dia mifampitohitohy sy mifandrairay eny ka ny fihinanana ny henan-kisoa avy ity no mety ho lasa «basin'ariary fito», tsy ho tian'ny mpanan-karena nefa tsy takatry ny manana akory. (Fanabeazana « haizina »)
Johannes (nitranga in-2) : Johannes Silentio Hari-hari ini wajah paradoks Jakarta terkuak lebar. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Atsimondrano (nitranga in-1) : Indrisy anefa fa nitera-doza nankarary renim-pianakaviana maromaro ny fanafody nampiasaina teny Atsimondrano teny. (Fanabeazana « haizina »)
fizotry (nitranga in-1) : Nipoitra teo am-baravarankely teo ambony rihana avy eo ilay tompon-trano, ka avy hatrany dia notifirin'izy ireo,dia voa teo amin'ny tendany », hoy ny fitantaran'ny lehilahy iray monina eo amin'ny manodidina, nitsikilo avy eo am-baravaran-kely ny fizotry ny fanafihana. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
dalana (nitranga in-1) : Tamin'ny alalan' ny isa 27 no ho 12 kosa ny nandresen'ny FT Manjakaray, izay tompondakan'Analamanga, teo amin'ny sokajy junior, ny ekipan'Atsimo Andrefana, tamin'ny manasa- dalana ilany. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
ekipan' (nitranga in-3) : na dia ratsy fanomboka tany amin'ny andro voalohany aza ny ekipan'i Atsinanana, teo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ho an'ny baolina lavalava, sokajy junior, dia tonga eo amin'ny fiafaran' ny fifaninanana. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
Seimad (nitranga in-1) : Ankoatra ireo trano mora miisa 100 an'ny Seimad, hanaovana an-tsapaka dia hisy trano mora hafa miisa 28 ihany koa an'ny Analogh, hamidy ho an'ny daholobe liana amin'izany. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
nahitana (nitranga in-2) : Isan'ny nahitana ratra ny tarehiny, ny tratrany ary misy fahatapahana roa eo amin'ny tongony, ny iray eo amin'ny feny ary ny iray kosa eo amin'ny ranjony. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
luahan (nitranga in-1) : @Oepaij Wilayah yang harusnya jadi zona luahan air (discharge) malah dibikin pemukiman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Taiwan (nitranga in-1) : Avy amin'ny zoron'ny firafitry ny mponina, tsy ho vitan'i Shina ny hanao fahagagana ara-toe-karena tahaka izay niainan'i Japan, Taiwan ary Korea. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Sina (nitranga in-1) : Ao amin'ny Sina Weibo aza dia io no lasa lohahevitra mafana laharana voalohany tamin'ny 16 sy 17 janoary. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Profesora (nitranga in-1) : Manampy fanazavana ny Profesora Wu Bihu avy ao amin'ny Oniversiten'i Beijing:
因为计生委有行政编制、准生寻租、超生罚款等利益链，国家不应被计生委绑架。强制人流谋杀生命、独生子女社会问题、性比例失衡、老龄化、城市化育子成本蹿升出生率下降等，都已预示计划生育政策可以洗洗睡了。 Maro ny tombontsoa ao amin'ny Vaomieran'ny mponina sy ny Fandrindram-Pianakaviana tafiditra, satria asan'olona maro no tafiditra sy ny onitra volabe aloa amin'ny zaza faharoa. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
hisian' (nitranga in-1) : Voalaza ihany koa fa «tamin'ireo fivoriana tany Maputo ka hatramin'ny fihaonana tany Seychelles no nangataka ny hanome-zana antoka azy ny amin'ny tsy tokony hisian'ny fanenjahana azy tamin'ireo tranga politika teto amintsika ny Filohan'ny tetezamita». (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
fiombonamben' (nitranga in-1) : miaiky ireo mpikambana eo anivon'ilay vondrona poli- tika mpisava lalana amin'ny fanatanterahana ny diniky ny samy Malagasy (Gec) sy ireo mpikambana eo anivon'ny fiombonamben'ireo sendikan' ny mpiasam-panjakana ambony fa «mbola tsy voavaha tante-raka ireo olana politika eto Madagasikara na dia tsy ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena aza ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana». (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
Madagascar (nitranga in-2) : taorian'ny laharana fahadimy azon'i Hajanirina Andriamparany, nandritra ny hazakazaka lavitra ezaka “Marathon de BOA” tany Bamako Mali, dia nankasitraka azy ny banky BOA Madagascar, ka nanolotra vola mitentina iray tapitrisa ariary. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
Analogh (nitranga in-1) : Ankoatra ireo trano mora miisa 100 an'ny Seimad, hanaovana an-tsapaka dia hisy trano mora hafa miisa 28 ihany koa an'ny Analogh, hamidy ho an'ny daholobe liana amin'izany. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
nahatonga (nitranga in-1) : Tsy mbola fantatra izay antony nahatonga ny fahavoazan'ireo vehivavy notsindronina. (Fanabeazana « haizina »)
aminà (nitranga in-1) : @Ngelantour Refesina aminà ‘cm' na ‘metatra' ny haavon'ny tondradrano eran'izao tontolo izao. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Noroniaina (nitranga in-1) : Rasoanaivo Noroniaina Sahoby, 20 taona, Anatihazo Isotry
media (nitranga in-1) : Niteraka adi-hevitra mafana hafa ao amin'ny media sosialy Shinoa ny fanambarana fitsipahana ny siosion-dresaka fa hajanona ny politikan'ny zaza tokana. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
TMB2A (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo
nampiarahana (nitranga in-1) : Entina hanehoana ireo kolontsaina malagasy, nefa miaraka amin'ireo kolontsaina vahiny an-tanàn-dehibe sy maoderina no antony nampiarahana ireo talenta marobe ireo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
injeniera (nitranga in-1) : Mijaly ihany koa ireo indostria vao mahita teknisiana ambony na injeniera manana traikefa sy fahaiza-manao momba ny elektronika, ny fihetsi- tenany, ny elektromekanika. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
Ambohimanarina (nitranga in-1) : Raberiaka Nomena, 16 taona, Ambohimanarina
elektrô (nitranga in-1) : Hotanterahina, etsy amin'ny Tana Arts Café ny «Basy gasy» ifangaroan' ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
tratran' (nitranga in-2) : nizara fanomezana ho an'ireo olona tany amin'ny tanàna nandehanany ny Airtel
Mitohy ny ezak'ireo orinasam-pifandraisana ho fandrakofana ireo faritra tsy mbola tratran'ny tambajotram-pifandraisan-davitra. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
ball (nitranga in-1) : ekipa iray nilalao basket teny Andraisoro
Shina (nitranga in-8) : tsy azo hozongozonina ny politikan'ny zaza tokana ao Shina, hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra faratampon'ny fandrindram-pianakaviana iray tamin'ny 14 Janoary 2013. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Monica (nitranga in-1) : Nangonin'i Monica Rasoloarison. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
Jakarta (nitranga in-15) : nataon'ny tondradrano goavana fahirano i Jakarta, renivohitr'i Indonezia. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Mpony (nitranga in-1) : Mponin'i Jakarta miampita arabe iray tondraky ny rano. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Airtel (nitranga in-4) : nizara fanomezana ho an'ireo olona tany amin'ny tanàna nandehanany ny Airtel
Mitohy ny ezak'ireo orinasam-pifandraisana ho fandrakofana ireo faritra tsy mbola tratran'ny tambajotram-pifandraisan-davitra. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
saja (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
Dream (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo
avylavitra (nitranga in-1) : com/JJZ6SYfo
kontak (nitranga in-1) : Kalau butuh bisa kontak mereka. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
fampirantiana (nitranga in-2) : Misy ny fampirantiana mitety ireo toerana maro amin'ity tanàna ity, ka ahitana ireo sary manamarika ny 90 taona nisiany. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
tratrany (nitranga in-1) : Isan'ny nahitana ratra ny tarehiny, ny tratrany ary misy fahatapahana roa eo amin'ny tongony, ny iray eo amin'ny feny ary ny iray kosa eo amin'ny ranjony. (Tapatapany)
notontosaina (nitranga in-1) : notontosaina omaly tany amin'ny sekolin'ny polisim-pirenena tany Antsirabe ny fametrahana ambany faneva ireo mpianatra ho »inspec-teur » sy »agent de police », andiany faha-20 nampiton-draina ny anarana hoe »Raitra ». (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
dada (nitranga in-1) : Ao Indonezia ihany izy io no refesina amin'ny ‘mata kaki, betis, dengkul, dada, pinggang, leher' (hakitrokely, ranjo, lohalika, valahana, tratra ary tenda). (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Challenger (nitranga in-3) : Barphil Andriantsiferanarivo
Congo (nitranga in-1) : nametra-pialana
politikan' (nitranga in-11) : tsy azo hozongozonina ny politikan'ny zaza tokana ao Shina, hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra faratampon'ny fandrindram-pianakaviana iray tamin'ny 14 Janoary 2013. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
terkena (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
Silentio (nitranga in-2) : Johannes Silentio Hari-hari ini wajah paradoks Jakarta terkuak lebar. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
nihaonan' (nitranga in-1) : CAN vita mialoha
Liang (nitranga in-1) : Niantso ny hanitsiana haingana ilay politika ny mpiara-manorina ny Ctrip Liang Jianzhang[zh]:
lumpuh (nitranga in-1) : Kota metropolis-modern yang berkali-kali salah urus dan bisa lumpuh hanya karena hujan semalaman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
arah (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
nahatratra (nitranga in-1) : « Efa nahatratra 12 izay ny kaomôrianina voasambotra tamin'ny fisandohana pasipaoro ny 15 ka hatramin'ny 31 desambra teo, ka izay no nahamailo ireo polisy nisava azy ireo », hoy hatrany ilay loharanom-baovao. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
Toamasina (nitranga in-1) : hotokanana indray ireo trano mora any Toamasina, tetikasan'ny fiadidiana ny Filohan'ny tetezamita natomboka ny volana novambra 2010. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
fifampiarahabana (nitranga in-2) : Nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona tetsy amin'ny Central Hôtel, tetsy Tsaralalàna, omaly no nanavaozana ny mpitantana ny sendikan'ny mpamokatra fampisehoana an-tsehatra sy rakikira ary rakitsary. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
Francis (nitranga in-1) : Ho an' ny orinasa, « tsy ampy ny teknika, ny fikirizana amin' ny fikarohana mpanjifa, ny fahaiza-miresaka… hany ka ifampitadiavana ireo mpivarotra tena mahafehy ny teknikan'ny varotra ankehitriny », hoy Rajaobelina Francis, filohan' ny fikambanan'ireo tale misahana ny mpiasa eto Madagasikara. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
nandehanany (nitranga in-1) : nizara fanomezana ho an'ireo olona tany amin'ny tanàna nandehanany ny Airtel
nomanina (nitranga in-2) : Fiaraha-mivavaka voa-laza fa nahazo ny tso-dranon'ny foibe FJKM, ary nomanina mpitan-drina vitsivitsy. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Fennecs (nitranga in-1) : Ara-pirahalahiana
adinon' (nitranga in-1) : Tsy adinon'ny Airtel ny namatsy vary, nizara kilalao sy vatomamy ho an' ireo mpianatry ny Epp izay tohanany ao an-toerana. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
Anosibe (nitranga in-2) : Voniniaina Marie Baldine, 27 taona, Anosibe Angarangarana
nandresen' (nitranga in-1) : Tamin'ny alalan' ny isa 27 no ho 12 kosa ny nandresen'ny FT Manjakaray, izay tompondakan'Analamanga, teo amin'ny sokajy junior, ny ekipan'Atsimo Andrefana, tamin'ny manasa- dalana ilany. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
empang (nitranga in-1) : Sama aja nyuruh orang ngebangun rumah di empang. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
birth (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
nanorina (nitranga in-1) : Hatreto aloha dia mbola tsy nanorina antoko politika ity minisitra teo aloha ity. (Sombiny)
Marolahy (nitranga in-1) : Rakotoarivelo Jean Marolahy, 22 taona, Anosibe Angarangarana
nijery (nitranga in-1) : “Delegasiona matanjaka ary ahitana ireo mpitatitra efa matihanina no nijery ny fiara. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
AT2B (nitranga in-5) : ekipa iray nilalao basket teny Andraisoro
Raberiaka (nitranga in-1) : Raberiaka Nomena, 16 taona, Ambohimanarina
nanavaozana (nitranga in-1) : Nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona tetsy amin'ny Central Hôtel, tetsy Tsaralalàna, omaly no nanavaozana ny mpitantana ny sendikan'ny mpamokatra fampisehoana an-tsehatra sy rakikira ary rakitsary. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
tanjaky (nitranga in-1) : ramanantsoa Benjamina minisitry ny Fitaterana
Manahy ny amin'ny mety ho endrika na tanjaky ny fiara vaovao hanoloana ireo fiara fitaterana eto amintsika ny minisitry ny Fitaterana. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
musibah (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
kalitaon' (nitranga in-1) : Hisy ihany koa fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra omena ny mpanjifa, na eo amin'ny tontolon'ny fampisehoana izany na eo amin'ny sehatry ny rakikira sy ny rakitsary. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
kaomôrianina (nitranga in-2) : teratany kaomôrianina efatra no tratran' ny polisy miaro ny sisin-tany tetsy Ivato ny alin'ny alakamisy teo, nitondra pasipaoro sandoka teny amin'ny seranam-piaramandina Ivato. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
Marc (nitranga in-2) : miaiky ireo mpikambana eo anivon'ilay vondrona poli- tika mpisava lalana amin'ny fanatanterahana ny diniky ny samy Malagasy (Gec) sy ireo mpikambana eo anivon'ny fiombonamben'ireo sendikan' ny mpiasam-panjakana ambony fa «mbola tsy voavaha tante-raka ireo olana politika eto Madagasikara na dia tsy ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena aza ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana». (Sombiny)
twitter (nitranga in-5) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
‏@DianOnno Jakarta Animal Aid Network (JAAN) sepertinya juga sedang membantu hewan yang terkena dampak #banjirJkt. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
anisan' (nitranga in-1) : Tanora avy amin'ny fokontany tena sahirana miisa 25, ao anatin'ny tetikasa Ilaiko, anisan'ireo rantsana amin'ny fandaharan'asa fiahiana ny maha olona. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
hanambara (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia tokony ho amin'iny herinandro ambony iny no hanambara ny fomba hoentina miroso amin'ny fanelanelanana ny krizy eto amintsika ny Ffkm. (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
Menolong (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
perfected (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
semua (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
gradually (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
Monsieur (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
saat (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
rakitsary (nitranga in-3) : Nandritra ny fifampiarahabana tratry ny taona tetsy amin'ny Central Hôtel, tetsy Tsaralalàna, omaly no nanavaozana ny mpitantana ny sendikan'ny mpamokatra fampisehoana an-tsehatra sy rakikira ary rakitsary. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
natokana (nitranga in-1) : Noharin'ny pasitera Rasendrahasina Lala ho toy ny fanairana azy ny fanafihan-jiolahy sy fandrobana nitranga tao an-tokantranony teny Amba- toroka, ny alin'ny talata hifoha alarobia teo, raha nandray fitenenana izy tamin'ny fotoam-pivavahana natokana ho azy sy ny fianakaviany teny amin'ny Trano vato Am-batonakanga afak'omaly. (Raharaham-pirenena – Hanao fanambarana ny Fjkm)
fandraharahàna (nitranga in-1) : Bev Be ny zavatra mila foanana androany, hatramin'ireo fihaonana mikasika fandraharahàna. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hanaovana (nitranga in-4) : Dia ampiasain'ny sasany atao hitadiavam-bola sy hanaovana fahagagana hampitombo ny lanjan'ny kisoa izany ny fanafody fanabeazana aizana. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
ditemukan (nitranga in-1) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Schlittke (nitranga in-1) : Navoitran'i Heiko Schlittke, tale jeneralin'ny Airtel ny endrika fampandrosoana entin'ny fahamoran'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fampidirana tambanjotra toy itony. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
mpilalao (nitranga in-3) : Ekipa mpilalao basket 60 izao no hita ao Andraisoro, misy olona 700 mahery. (Anjoron- »CAN »)
minisiteran' (nitranga in-1) : Misy ny tsy mahita asa mihitsy », hoy Razafi- mahatratra Dominique, avy ao amin'ny minisiteran' ny Fampianarana ambony. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
nipoitra (nitranga in-1) : Johannes Silentio Tato anatin'ny andro vitsy, nipoitra ny endrika miafin'i Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
asep (nitranga in-1) : Sary avy amin'i asep sambas. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
ngebangun (nitranga in-1) : Sama aja nyuruh orang ngebangun rumah di empang. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
volabe (nitranga in-1) : Manampy fanazavana ny Profesora Wu Bihu avy ao amin'ny Oniversiten'i Beijing:
hiangaly (nitranga in-1) : Mpanakanto valo no hifandrimbona amin'ny fanafanana ny hetsika anio alina manomboka amin'ny 9 ora : Zintsai, Namesis crew, LovaZen, DoubleNN eo amin'ny fiangaliana ny Rap ; Monsieur Njo kosa no hitondra ny talentany amin' ny sehatry ny poezia raha hiangaly ny hira i Bolo. (Basy gasy II – Hiara-dia ny mozika elektrô, ny rap ary ny Slam)
Times (nitranga in-1) : Ny lehiben'ny Fanoratana ao amin'ny Global Times Hu Xijin [Hz] no nandray ny fitarihana izany:
avoakan' (nitranga in-1) : Ny amin'ny tokony hikajiana ny solifara avoakan'ny fiara. (Fanavaozana fitaterana – Olona matihanina no tokony hanafatra ny fiara)
namatsy (nitranga in-1) : Tsy adinon'ny Airtel ny namatsy vary, nizara kilalao sy vatomamy ho an' ireo mpianatry ny Epp izay tohanany ao an-toerana. (Fifandraisan-davitra – Manitatra ny tambajotrany ny Airtel)
nanana (nitranga in-1) : Anisan'ny mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan satria dia hita taratra ao anatin'ny fampirantiana ny fandalovan'ity tarika malagasy nanana ny lazany tamin'ny taona 60 ity, tany an-toerana. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
iaingan' (nitranga in-1) : Avy amin'ny fanafody fanabeazana aizana avokoa no iaingan'ny raharaha. (Fanabeazana « haizina »)
nahamailo (nitranga in-1) : « Efa nahatratra 12 izay ny kaomôrianina voasambotra tamin'ny fisandohana pasipaoro ny 15 ka hatramin'ny 31 desambra teo, ka izay no nahamailo ireo polisy nisava azy ireo », hoy hatrany ilay loharanom-baovao. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
bandara (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Baldine (nitranga in-1) : Voniniaina Marie Baldine, 27 taona, Anosibe Angarangarana
Itaosy (nitranga in-1) : Zazavavikely iray vao 3 taona monja indray no voalaza fa nosimbain'ny tovolahy 22 taona teny Itaosy, afak'omaly. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
nilaza (nitranga in-2) : Ireo mpikam- bana eo anivon'ny antoko Tanora malaGasy Vonona aloha ny alakamisy no efa nilaza mazava fa «tsy olo-meloka ny Filohan'ny tetezamita ary tsy mila izany famotsoran-keloka izany». (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
karay (nitranga in-1) : ekipa iray nilalao basket teny Andraisoro
doza (nitranga in-1) : Hivoaka amin' ny sary na tabilao avokoa mantsy manomboka izao, amin'ny alalan'ny « logiciel » vaovao natolotra, ny antontam-baovao ampitaina avy any amin'ireo toerana isanisany ianjadian'ny rivo- doza na ny loza voajanahary. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
nanotrona (nitranga in-1) : Manamboninahitra miaramila sy sivily maro no tonga nanotrona ity lanonana ity tany Antsirabe. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
Kristy (nitranga in-1) : hanao fanambarana goavana momba ny raha- raham-pirenena ny Fian-gonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fjkm) amin'ny sabotsy 26 janoary izao, eny amin' ny Fiangonana Isotry Fiti-avana, araka ny nambaran'ny filohany, ny pasitera Rasendrahasina Lala afak'omaly. (Raharaham-pirenena – Hanao fanambarana ny Fjkm)
hotokanana (nitranga in-1) : hotokanana indray ireo trano mora any Toamasina, tetikasan'ny fiadidiana ny Filohan'ny tetezamita natomboka ny volana novambra 2010. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
Léopards (nitranga in-1) : nametra-pialana
imasoan' (nitranga in-1) : Any amin'ny fampanarahan-dalàna ireo sekoly ambony tsy miankina no imasoan'ny fanjakana ankehitriny, fa tsy mbola tonga amin'izany fampanarahana ny tolotra amin' ny filàn'ny tsenan'ny asa izany. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
malah (nitranga in-1) : @Oepaij Wilayah yang harusnya jadi zona luahan air (discharge) malah dibikin pemukiman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
fampanarahana (nitranga in-1) : Any amin'ny fampanarahan-dalàna ireo sekoly ambony tsy miankina no imasoan'ny fanjakana ankehitriny, fa tsy mbola tonga amin'izany fampanarahana ny tolotra amin' ny filàn'ny tsenan'ny asa izany. (Tsenan’ny asa – Be ny sehatra malalaka nefa vitsy ny sekoly mampiofana ho amin’izany)
Azontsika (nitranga in-1) : Azontsika atao ny manampy ireo mizaka ny mafy amin'ity tondradrano ao Jakarta ity. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Antsahamanitra (nitranga in-1) : Mialoha izany dia hisy koa fiaraha- mivavaka hataon'ny Fjkm eny Antsahamanitra rahampitso. (Raharaham-pirenena – Hanao fanambarana ny Fjkm)
1981 (nitranga in-1) : Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
nanafihana (nitranga in-1) : Vola Ar 700 000, solosaina enti-tanana iray ary firavaka volamena maromaro no lasan'ireo jiolahy mano-didina ny folo nirongo basy tamin'io fotoana nanafihana an'ilay raim- pianakaviana io. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
logiciel (nitranga in-1) : Hivoaka amin' ny sary na tabilao avokoa mantsy manomboka izao, amin'ny alalan'ny « logiciel » vaovao natolotra, ny antontam-baovao ampitaina avy any amin'ireo toerana isanisany ianjadian'ny rivo- doza na ny loza voajanahary. (Fiaraha-miasa – Nohatsaraina ny fiatrehana ny loza voajanahary)
biraon' (nitranga in-1) : Notanana ao amin'ny biraon'ny polisy etsy Anosy ireto teratany vahiny ireto. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
ramanantsoa (nitranga in-1) : ramanantsoa Benjamina minisitry ny Fitaterana
Notolorana (nitranga in-1) : Notolorana mari- pahaizana fanamarinana ny nahavitany ny fiofanana momba ny fitantanan-draharaha ny tanora 40 mianadahy omaly, teny amin'ny ivon-toerana Ilaiko eny Soavimasoandro. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
hivarinan' (nitranga in-1) : #BanjirJKT
@Oepaij Ireo faritra nomanina hivarinan'ny rano amin'izao fotoana no efa lasa tanàna misy mponina. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Yuan (nitranga in-1) : Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
narehitry (nitranga in-1) : Nanomboka vao haingana tao ny adi-hevitra raha tonga ny fotoana hialana amin'ity politika ity, izay narehitry ny fahaleovan'ny olona ny ambaratongan-drafitra amin'ny fanerena hanaovana fanalan-jaza. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Ahiana (nitranga in-1) : Ahiana ho misy fialonana ihany koa amin'ilay izy satria manana fiainana tsara ilay raim-pianakaviana », hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
firafitry (nitranga in-1) : Avy amin'ny zoron'ny firafitry ny mponina, tsy ho vitan'i Shina ny hanao fahagagana ara-toe-karena tahaka izay niainan'i Japan, Taiwan ary Korea. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
nahavitany (nitranga in-1) : Notolorana mari- pahaizana fanamarinana ny nahavitany ny fiofanana momba ny fitantanan-draharaha ny tanora 40 mianadahy omaly, teny amin'ny ivon-toerana Ilaiko eny Soavimasoandro. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
hihoitra (nitranga in-1) : vonona hihoitra amin'ny fiainana. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
pemukiman (nitranga in-1) : @Oepaij Wilayah yang harusnya jadi zona luahan air (discharge) malah dibikin pemukiman. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Jean (nitranga in-2) : Raha ny voalazan-dRakotoarisoa Jean Jacques, talen'ny kabinetran'ny minisitera Fampianarana ambony dia 50 eo ireo efa nahazo fankatoavana hisokatra sy hampianatra. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
junior (nitranga in-2) : na dia ratsy fanomboka tany amin'ny andro voalohany aza ny ekipan'i Atsinanana, teo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ho an'ny baolina lavalava, sokajy junior, dia tonga eo amin'ny fiafaran' ny fifaninanana. (Rugby Junior – Tafita hiatrika ny famaranana Atsinanana sy Analamanga)
Wang (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
diniky (nitranga in-1) : miaiky ireo mpikambana eo anivon'ilay vondrona poli- tika mpisava lalana amin'ny fanatanterahana ny diniky ny samy Malagasy (Gec) sy ireo mpikambana eo anivon'ny fiombonamben'ireo sendikan' ny mpiasam-panjakana ambony fa «mbola tsy voavaha tante-raka ireo olana politika eto Madagasikara na dia tsy ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena aza ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana». (Antso amin’ny FFKM – Mbola mitaky lamina politika ny Gec sy ny mpiasam-panjakana ambony)
mpisera (nitranga in-2) : Mampiasa ny tenifototra #banjirJKT (tondradranon'i Jakarta) ireo mpisera ety anaty aterineto mba hizaràna vaovao mikasika ny fivoaran'ilay tondradrano any amin'ny distrika samihafa. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Seychelles (nitranga in-1) : Voalaza ihany koa fa «tamin'ireo fivoriana tany Maputo ka hatramin'ny fihaonana tany Seychelles no nangataka ny hanome-zana antoka azy ny amin'ny tsy tokony hisian'ny fanenjahana azy tamin'ireo tranga politika teto amintsika ny Filohan'ny tetezamita». (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
tengah (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Wall (nitranga in-1) : Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
rate (nitranga in-1) : Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
Twitter (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
dampak (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
dengkul (nitranga in-1) : Ao Indonezia ihany izy io no refesina amin'ny ‘mata kaki, betis, dengkul, dada, pinggang, leher' (hakitrokely, ranjo, lohalika, valahana, tratra ary tenda). (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hiakaran' (nitranga in-1) : Azo heverina fa ampy tsara ho azy ireo ny fanomanan-tena mialoha ny 22 janoary, fotoana hiakaran'izy ireo kianja hihaona amin'ny Tonizia eo amin'ny vondrona D. (Anjoron- »CAN »)
sehoana (nitranga in-1) : Hetsika voalohany ho an'ny sendika amin'ity taona ity ny fanentanana ireo mpamokatra fampi- sehoana, rakitsary sy raki-peo, mba hiditra ao amin'ny Sendika. (Fikarakarana fampisehoana – Hitarika ny sendika i Mamy Do Sôl)
Andriantsiferanarivo (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo
Tato (nitranga in-1) : Johannes Silentio Tato anatin'ny andro vitsy, nipoitra ny endrika miafin'i Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
sambas (nitranga in-1) : Sary avy amin'i asep sambas. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
Antaninarenina (nitranga in-1) : Amin'ny andiany manaraka dia mety aloan'ny BOA Madagascar mihitsy ny karamany mandritra ny fanomanana”, hoy i Jacques Dillet, tale jeneralin'ity banky ity, tetsy Antaninarenina omaly. (Hazakazaka « Marathon de Bamako » – Nomen’ny BOA Ar 1 tapitrisa i Hajanirina Andriamparany)
Maputo (nitranga in-1) : Voalaza ihany koa fa «tamin'ireo fivoriana tany Maputo ka hatramin'ny fihaonana tany Seychelles no nangataka ny hanome-zana antoka azy ny amin'ny tsy tokony hisian'ny fanenjahana azy tamin'ireo tranga politika teto amintsika ny Filohan'ny tetezamita». (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
hampiharana (nitranga in-1) : Notsindrian'ity farany tao anatin'ny fanambarana nivoaka omaly koa ny amin'ny tokony hampiharana ireo an-dininy rehetra voafaritra ao anatin'ny sori-dalana. (Sombiny)
hanapaka (nitranga in-1) : hanapaka ny famatsiam-bola amin'ny fifidianana ny iraisam-pirenena raha tsy tanterahina an-tsakany sy an-davany ny tondrozotra. (Ry matanjaka)
nanafika (nitranga in-1) : Olona folo no voa-sambotry ny zandary tamin'ity raharaha ity izay voalaza fa isan'ireo nanafika teny Ankadi-kely ihany koa taorian' ny teny Ambohitrara-haba. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
Dest (nitranga in-1) : Mandritra izany, Dest, mpampiasa Google dia nanangana sarintany Google iray hanarahana ilay tondradrano goavana ao Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hanitsiana (nitranga in-1) : Niantso ny hanitsiana haingana ilay politika ny mpiara-manorina ny Ctrip Liang Jianzhang[zh]:
Blaise (nitranga in-1) : Maro ny zavatra hitsa- rana azy ireo amin'izany ankoatra ny fanadinana farany toy ny fitondran-tena izay manana lanjan'isa 5 », hoy ny kaomisera divizionera Randimbisoa Blaise Richard, talen'ny sekoly. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
4ème (nitranga in-1) : Niala tamin' ny fianarana ihany koa aho teo amin'ny kilasy 4ème, noho izay fahasahiranana izay. (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
Street (nitranga in-1) : Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
1ora (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo
Marie (nitranga in-1) : Voniniaina Marie Baldine, 27 taona, Anosibe Angarangarana
setinggy (nitranga in-1) : ‏@kalamkata Tol bandara arah tengah kota, jalur kanan terendam setinggi setengah bodi mobil sedan. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
sekolah (nitranga in-1) : ‏@KartuPos Ular gede banget ditemukan depan sekolah Santa Ursula sekitar Lapangan Banteng. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
teto (nitranga in-2) : Voalaza ihany koa fa «tamin'ireo fivoriana tany Maputo ka hatramin'ny fihaonana tany Seychelles no nangataka ny hanome-zana antoka azy ny amin'ny tsy tokony hisian'ny fanenjahana azy tamin'ireo tranga politika teto amintsika ny Filohan'ny tetezamita». (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
filazàna (nitranga in-2) : Sary avy amin'ny @MustafidzZ
efitrano (nitranga in-1) : Ahitana efitra efatra isanisany ity farany, ankoatra ny lakozia toy ireny karazany fahita any Amerika ireny, izany hoe miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, trano fidiovana misy rano mafana sy ny trano fivoahana. (Fonenana – Trano mora 28 hafa hamidy tsy hisy an-tsapaka)
ireodia (nitranga in-1) : Nipoitra teo am-baravarankely teo ambony rihana avy eo ilay tompon-trano, ka avy hatrany dia notifirin'izy ireo,dia voa teo amin'ny tendany », hoy ny fitantaran'ny lehilahy iray monina eo amin'ny manodidina, nitsikilo avy eo am-baravaran-kely ny fizotry ny fanafihana. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
Nandika (nitranga in-2) : com/JJZ6SYfo
nikija (nitranga in-1) : Kenda ny asa fihariana ara-toekarena tao an-toerana taorian'ny roa andro nifanesy nisian'ny orana nikija tao Jakarta. (Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta)
hitantana (nitranga in-1) : nametra-pialana
nody (nitranga in-1) : « 302 no isan'izy ireo tany am-piandohana fa ny iray kosa nalefa nody rehefa hita fa nitondra vohoka. (Polisim-pirenena – Hoarahi-maso akaiky ny fitondran-tenan’ireo vao noraisina)
Anosy (nitranga in-1) : Notanana ao amin'ny biraon'ny polisy etsy Anosy ireto teratany vahiny ireto. (Fisandohana – Kaomôrianina efatra tratra nitondra pasipaoro sandoka)
Bihu (nitranga in-1) : Manampy fanazavana ny Profesora Wu Bihu avy ao amin'ny Oniversiten'i Beijing:
hitazonana (nitranga in-2) : nANAMPY TOSIKA > Sady nidera ny Filohan' ny tetezamita, Andry Rajoelina tamin'ny fana- pahan-kevitra noraisiny no mbola nanamafy ny fanambaran'ny Von-drona Sadc ny amin'ny tokony hitazonana ny tetiandrom-pifidianana ho amin'ny volana mey 2013 ny sekretera jenera- lin'ny Firenena mikambana, Ban-ki Moon. (Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan'ny Zaza Tokana Ao Shina)
Nitombina (nitranga in-1) : Nitombina ny fahalalan'izy ireo mahakasika ilay raim-pianakaviana mpivarotra fiara vao avy nahalafo fiara tamin'io fotoana io. (Ambohitrarahaba – Antony ara-bola no namonoan’ ireo jiolahy ilay mpivarotra fiara)
Betongolo (nitranga in-1) : Alahady 20 janoary :
8 ora : U20 Vehivavy : ACA # BFT ; 9 ora 30 : U16 Lehilahy : Ambohipo # Challenger ; 11 ora : U20 Lehilahy : Challenger II # JSB ; 1 ora : U20 Lehilahy : BCS # LTP 2 ora : N1A : Betongolo # AT2B. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
notsindronina (nitranga in-1) : Tsy mbola fantatra izay antony nahatonga ny fahavoazan'ireo vehivavy notsindronina. (Fanabeazana « haizina »)
Charles (nitranga in-1) : Noentin'ny ankolafy Ravalomanana ho porofo fanohanana ity fitoriana ity ny fanambarana sesilany nataon'ny lietnà-kolonely Charles Andrianasoavina mahakasika io raharaha io. (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
nirìna (nitranga in-1) : Niantso ny hanitsiana haingana ilay politika ny mpiara-manorina ny Ctrip Liang Jianzhang[zh]:
Anisan' (nitranga in-2) : Anisan'ny hanamarika ity «Basy gasy» ity ihany koa ny tontolon'ny sary pika hiarahana amin'i Rija Solo. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
hojeren' (nitranga in-1) : Mba tokony hojeren'ny fanjakana ny hetsika eny anivon'ny fokontany toy itony, izay mahasarika ny tanora saika avy amin'ny lafy valon'ny renivohitra », hoy Rabenjamina Fanja, mpitarika ny AT2B. (Fifaninanam-pokontany – Lalao basket 20 no ho hita eny Andraisoro)
hanampiako (nitranga in-2) : Hanitatra ny fidiram-bolanay izahay hanampiako ny reniko ». (Fiahiana ny maha olona – Tanora tsy an’asa 40 niofana hamorona tetikasa vonona hihoitra amin’ny fiainana)
terdekat (nitranga in-1) : Sary avy amin'ny pejy Twitter an'i @KartuPos
Cachan (nitranga in-2) : mankalaza ny tsingerin- taona faha-90 ny tanànan' i Cachan any Frantsa. (Fampirantiana – Mahatsiaro ny tarika Les Surfs ny any Cachan)
2009 (nitranga in-2) : Araka ny fantatra dia efa tafapetraka eo anivon'ny tribonaly iraisam-pirenena sy any amin'ny vondrona Sadc ny fitorian'ny ankolafy Ravalo-manana ny Filohan'ny tete-zamita, Andry Rajoelina, mahakasika ny voalaza fa «fanonganam-panjakana niarahan'ny Tafika sy ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona tamin'ny taona 2009 ». (Resaka fanonganam-panjakana – Tonga eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoriana an-dRajoelina)
Nosamborinay (nitranga in-1) : Nosamborinay avy hatrany ilay lehilahy voalaza ho nahavanon-doza. (Zava-doza – Zazavavikely telo taona voalaza fa voaolana)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/19_Janoary_2013&oldid=9609941"
Voaova farany tamin'ny 19 Janoary 2013 amin'ny 21:38 ity pejy ity.